တိုကျပှဲဝငျ အခဈြဇာတျလမျး – My Blog
” အကို….နာသေးလား ဟငျ….” အေးသီက သူ့အကို မြိုးစဈကို ဒဏျရာမြားအား ဆေးထညျ့ပေးရငျး လှမျးမေး၏။ မြိုးစဈ အံကို တငျးတငျးကွိတျသညျ။ ” သကျသာနပေါပွီ….ညီမလေးရယျ….တောကျ….ဒီကောငျငဘ တမငျယုတျမာတာ….ဒီကောငျ ငါ့ကို ရနျငွိုးထားပွီး တမငျခြောကျခတြယျ…ဆိုတာ…ငါသိတယျ….အေးသီ….” ” အကိုရယျ….ဒေါသမထှကျပါနဲ့….သူ့အကုသိုလျနဲ့သူ သှားမှာပါ….” အေးသီက ဂှမျးကို အရကျပြံညှဈခပြေးရငျး ပတျတီးစညျးပေးရငျး သူ့အကိုအား နှဈသိမျ့သညျ။ မြိုးစဈမှာ တောကျတ ခေါကျခေါကျနှငျ့ ငဘနှငျ့ ဂပြနျတှကေို စကျဆုပျရှံရှာ မုနျးတီးသှားသညျ။ ” နနှေငျ့ဦးပေါ့ ငဘရာ….ကံကွမ်မာဟာ ဘယျတော့မှ မကျြနှာမလိုကျပါဘူး….” အေးသီ မြိုးစဈကိုကွညျ့ရငျး ပငျ့သကျကို ရှူသှငျးလိုကျသညျ။ နာကငျြသော သကျပွငျးမောကို အရှညျ ကွီးခသြညျ။ လပွညျ့ညဖွဈသညျ။ အေးသီ အိပျမပြျောနိုငျသေး သူ့ခဈြသူ ကိုထှနျးကြျော ဤနညေ့ သူ့ဆီလာလိမျ့မညျ။ သူနှိုကျ နကေဖြွဈ သော ကွမျးပေါကျကို ဖှငျ့ထားလိုကျသညျ။ ကိုထှနျးကြျော ရောကျလာလြှငျ ထိုကွမျးပေါကျမှ သူမကို ကုတျနှိုးလိမျ့မညျ။
ထိုခတျေက အပြိုတို့ အိပျခနျး၌ အပေါကျဖောကျထားတတျကွသညျ။ အပြိုတို့၏ ခဈြသူကို ဤအပေါကျမှ ညလူခြေ တိတျခြိနျတှငျ စကားပွောကွသညျ။ ထိုအခွငျးအရာကို အပေါကျနှိုကျသညျဟု ချေါတှငျကွသညျ။ မိမိ၏ ခဈြသူမိနျးမပြိုက ကွညျဖွူသောအခါ ထို အပေါကျမှ လကျလေးဆုပျကိုငျခွငျး စကားပွောခွငျးပွုကွသညျ။ ရှာရှိ ကာလသားတို့သညျ ညဆိုလြှငျ သူခိုးဓားပွမြားရနျမှ ကာ ကှယျစောငျ့ရှောကျရသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ကာလသားမြားက မိမိတို့၏ခဈြသူအိမျသို့သှားကာ အ ပေါကျနှိုကျကာ တှဆေုံ့စကားပွော ခှငျ့ရကွသညျ။ အပေါကျဖှငျ့ပေးသူ မိနျးမပြိုမှာလညျး လူကွီးမြား မိဘမောငျဖှားမြား မသိ အောငျ ထိုအပေါကျကို ဖေါကျရသညျ။
အပေါကျမှာ လကျသီးဆုပျအရှယျထကျ ကွီးသညျ။ မိနျးမပြိုတို့သညျ မိမိ၏ခဈြသူနှငျ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ လမျးခှဲပွတျစဲလို လြှငျ ထိုဖှငျ့ထားသော ကွမျးပေါကျကို သဈသားပွားဖွငျ့ အသပေိတျပဈလိုကျကွ သညျ။ ယောကျြားပြိုမှာလညျး မိမိကို မိမိ၏ခဈြသူမုနျးပွီ၊ ပွတျပွီဟူ၍ အပေါကျပိတျလိုကျလြှငျ သိရသညျ။ ထိုအလအေ့ထ သညျ ယခုအခါသျော ပပြောကျသှားပွီ ဖွဈသညျ။ အေးသီသညျ သူမ၏ခဈြသူ အကွိမျကွိမျတောငျးဆိုခဲ့ဘူးသော သူမ၏ အပြိုစငျဘဝကိုပငျ မပေးခဲ့၊ အခုသျော ယုတျ မာသောသူမြားကွောငျ့ မိမိ၏ အပြိုရညျပကျြရသညျ။ မိမိ၏ခဈြသူ ကိုထှနျးကြျောကို မညျသို့ဆကျဆံပွောဆိုရမညျနညျး။
” အဟငျ့….အဟငျ့….” အေးသီ ငိုသညျ။ မကျြရညျမြား ပါးပွငျမှတဆငျ့ ခေါငျးအုံးတိုငျအောငျ ကဆြငျးသညျ။ ကိုထှနျးကြျောသညျ သူမအား လကျထပျခှငျ့တောငျးထားသူဖွဈသညျ။ ဤနှဈ စပါးပျေါလြှငျ သူမနှငျ့ လကျထပျရနျ ဆုံးဖွတျတိုငျပငျထားကွသညျ။ ကို ထှနျး ကြျောမှာ လူအ၊ လူအေးတဈယောကျဖွဈသညျ။ လှတေဈစငျးဖွငျ့ ရိုးသားစှာ တံငါလုပျငနျးလုပျကာ တောငျယာစိုကျပြိုးခွငျး အလုပျကို လုပျကိုငျခွငျးဖွဈသညျ။ အေးသီကိုလညျး တုနျနအေောငျ ခဈြသညျ။ အေးသီသဘော အရာရာဖွညျ့ဆညျးပေး တတျသညျ။ ကိုထှနျးကြျောက အသားညိုသညျ။ ကိုယျကာယကနျြးမာသနျစှမျးသညျ။ အမွဲလိုလို ပငျလယျဘကျ ဖောငျမြှော နေ တတျသူဖွဈသဖွငျ့ နဒေဏျ လဒေဏျခံရသညျ့အတှကျ အသားညို၍ ကနျြးမာတောငျ့တငျးသူဖွဈသညျ။
အေးသီ အတှေးတှေ ရှုတျထှေးနသေညျ။ သူ၏အတှေးပုံရိပျမြား၌ ငဘ၏ လီးခြောငျး ငဘ မိမိကို အကွံ ပကျစကျစှာ လိုးနပေုံ၊ နောကျ ဂပြနျမာစတာကွီး၏ ကွီးမားသော လီးတနျကွီး မိမိ၏ စောကျပတျထဲသို့ ဝငျထှကျနပေုံ၊ သူမ ထိုအတှေးမြား ကို အာရုံမှ ဖယျထုတျလိုကျသညျ။ သိပျမကွာပါ ထိုအတှေးမြားသညျ အသိအာရုံအတှေးထဲသို့ လိုလိုခငျြခငျြ ဝငျရောကျတှေး မိပွနျသညျ။ ထိုအခါ အေးသီ စိတျတှေ ထရှလာသညျ။ နှလုံးခုနျနှုနျးတှေ မွနျဆနျလာသညျ။ အကွောအခဉျြမြား တောငျ့တငျး လာသညျ။ စောကျ ပတျလေးထဲမှလညျး ရှစိရှစိဖွဈလာသညျ။ သူမအလိုလို ပေါငျလေးဟကာထောငျပွီး စောကျဖုတျဖောငျး ဖောငျးလေးကို လကျဖဝါး နှငျ့ ပှတျသပျကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ကနျြလကျတဈဖကျကလညျး အိထှေးပုံကနြသေော နို့အုံကို ညှဈ ဆုတျပှတျသပျကိုငျမိနသေညျ။
သူမ တခဏ အသိပွနျဝငျလာသညျ။ အသိစိတျက ဖွဈပျေါနသေော ဆန်ဒမြားကို ငွငျးဆနျ သညျ။ သို့သျော သူမ၏ လကျမြားသညျ နို့အုံနှငျ့ စောကျဖုတျမှ ခှာလို့မရတော့ပေ။ လကျခလယျခြောငျးဖွငျ့ စောကျစိလေးကို ပှတျတိုကျထိနရေခွငျး၊ နို့အုံလေးကို ပှတျသပျ နရေခွငျးမှာ အရသာထူးမြား ဖွဈပျေါနသေညျ့အတှကျ ထိုအရသာကို လိုခငျြစှာ ခံစားနရေသညျ။ သိပျမကွာပါ သူမ၏စောကျပတျ လေးမှ အရညျခြောဆီလေးမြား ပှကျကနဲ ထှကျကလြာသညျ။ သူမသညျ မာစတာကွီး၏ လီးခြောငျးကွီး မိမိ၏စောကျပတျထဲသို့ ဝငျရောကျလိုးဆောငျ့နသေညျဟု တှေးနမေိသညျ့အတိုငျး မိမိ၏ လကျ ခလယျလကျခြောငျးမှာလညျး စောကျခေါငျးပေါကျလေးထဲ သို့ ဝငျထှကျနသေညျ။ ထိုအခြိနျမှာပငျ သူမ၏ ကြောပွငျကို အပေါကျမှ လကျနှိုကျလာသညျ။
” အေးသီ….အေးသီ….” အေးသီ ထမိနျကိုပွနျဖုံးကာ ဖြာကိုဆှဲလိုကျသညျ။ အပေါကျဝ၌ ကိုထှနျးကြျောကို တှသေ့ညျ။ ” အေး သီ….” ” ကိုထှနျးကြျော….ရှငျ…ယာထဲက စောငျ့နေ….ကြှနျမ နောကျဖေးပေါကျက ဆငျးလာခဲ့မယျ….” ထိုသို့သော အေးသီ၏ စကားကွောငျ့ ထှနျးကြျော ပြျောသှားသညျ။ ယာထဲသို့ ပွနျပွေးသညျ။ လရောငျသညျ ထှနျးပ စှာ ဖွာကနြသေညျ။ ထှနျးကြျော နဘူး ခွုံအကှယျ၌ အေးသီလာရာသို့ လှမျးမြှျောနမေိသညျ။ အေးသီဆီက ဤညတှငျ ခဈြခှငျ့ ကိုတောငျးရမညျ။ အေးသီကို သူဆကျပွီး မ နနေိုငျတော့သညျ့အကွောငျးကို ပွောရမညျ။ အေးသီ၏ လှပကဈြလဈသော ခန်ဓာ ကိုယျလေးကို ပှဖေ့ကျထားမညျ။ ထှနျးကြျောသညျ အပြျောကွီး ပြျောနရေသညျ။ အေးသီက ဤနညေ့မှ ထူးဆနျးစှာ သူ့ကို အပွငျ၌ တှရေ့နျခြိနျးဆိုသညျ။ ယခငျညမြားက ကွမျးပေါကျမှပငျ လကျလေးကိုသာ ကိုငျတှယျခှငျ့ရသညျ။
ယနညေ့တော့ အေးသီသညျ မိမိ၏ရငျခှငျထဲသို့ ရောကျရပတေော့မညျ။ နဘူးခုနျတနျးလြားလေးပျေါ လရောငျသညျ ဖွာကနြသေညျ။ ထှနျးကြျောကွညျ့နရောမှ အေးသီ အပွေးတဈပိုငျးလေး သူ့ဆီသို့ ရောကျလာသညျ။ ထှနျးကြျော ဘေးနားမှာ ဝငျထိုငျသညျ။ လရောငျက အေးမွလငျးစိုနသေညျ။ အေးသီက ထှနျးကြျောကို အဓိပ်ပာယျ ပါသော မကျြလုံးအကွညျ့ဖွငျ့ ရှနျးရှနျးဝအေောငျ ကွညျ့သညျ။ ထှနျးကြျော ရငျခှငျထဲသို့ ပခုံးလေးယိုငျကာ ထှနျးကြျောကို ဖကျထား ပွီး ” ကိုထှနျးကြျော….ရှငျ ကြှနျမကို ဘယျလောကျခဈြလဲဟငျ….” ” မေးမှ မေးရကျလေ အေးသီရယျ….နငျ့ကို ငါ့ရဲ့အသှေးအသား တှထေဲက ခဈြတာပါ….” ” ခဈ…ခဈ…တကယျလား….” အေးသီ ရယျသညျ။ ထှနျးကြျောက ရငျတှေ တလှပျလှပျဖွဈကာ အေးသီ ကို တငျးကပျြစှာ ပှထေ့ားသညျ။ ” ကိုထှနျးကြျော….” ” ဘာလဲ….အေးသီ…” ” ကိုထှနျးကြျော ပေါငျပျေါမှာ ထိုငျမယျနျော….” ထှနျးကြျော ရငျတှတေဆတျဆတျ ခုနျသှားသညျ။ အိပျမကျမကျနသေူအလား ထငျမှတျမိသညျ။
” အငျး…ထိုငျ….ထိုငျလေ….အေးသီ….” အေးသီက ကိုယျလေးရှကေ့ာ ထှနျးကြျောပေါငျပျေါသို့ ထိုငျခသြညျ။ တငျသားအိအိကွီး မြားက ထှနျးကြျောပေါငျပျေါ အိစကျကာ ထိနေ၏။ ထှနျးကြျော၏ လီးခြောငျးကို တငျသားမြားက ဖိကပျထားသညျ။ ထှနျးကြျော အေးသီကို တငျးကပျြစှာ ဖကျထား၏။ သူ၏လီးသညျလညျး အိထှေးသော တငျသား၏ အထိအတှကွေ့ောငျ့ မာထနျလာ တော့သညျ။ အေးသီသညျ သူမ၏ တငျသားကို လီးမာမာကွီး တငျးကနဲ တငျးကနဲ တိုးထိကပျနသေညျကို သိလိုကျသညျ။ အေးသီ မသိမသာလေး တငျ ပါးသားဖွငျ့ လီးခြောငျးကို ဖိနှဲ့ပေးလိုကျသညျ။ ထှနျးကြျော၏ လကျတှကေို သူမ၏ နို့အုံပျေါတငျပေးလိုကျ သညျ။ ထှနျးကြျော သညျ သူ၏လကျအား အေးသီက နို့အုံပျေါတငျပေးလိုကျသောအခါ စိတျထဲ၌ ကယောငျခြောကျခြားဖွဈသှား သညျ။ ယနေ့ အေးသီသညျ ဘယျလိုကွောငျ့ သူ့ကိုဤမြှအထိ အခှငျ့အရေးပေးနသေညျကို စဉျးစားလို့မရဖွဈနသေညျ။ အမှနျတော့ အေးသီသညျ ကာမဆန်ဒမြား ထကွှသောငျးကနျြးနသေောကွောငျ့ပငျဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ ထှနျးကြျောအား သနားသညျ။ သူမ ခဈြသာ သူနှငျ့ ကာမခရီးကို သှားခငျြလာမိသညျ။ သို့သျော ထှနျးကြျောသညျ ရိုးအလှသညျ။ ဒါကွောငျ့ပငျ သူမကစ၍ လမျးခငျးပေးခွငျး ဖွဈသညျ။ ထှနျးကြျောက နို့အုံနှဈလုံးကို မဆုပျရဲဆုပျရဲဖွငျ့ ကိုငျဆုပျရငျး ” အေးသီ….အရမျးခဈြတယျကှာ….အေးသီကို လကျထပျ ယူပါ့မယျ….ဒီနေ့ ကိုလေ…အေး…အေးသီကို….” ထှနျးကြျော အသံတှတေုနျရီနသေညျ။ နို့အုံလေးကို ဖိဆုပျခပြှေတျနသေညျ။
အေး သီက ဖငျနှဈခွမျးကွားသို့ လီး ခြောငျးကွီးကို ဖိနှဲ့ကာ တှနျးပေးရငျး ” ကိုထှနျးကြျော….ဆန်ဒရှိသလို….လုပျလေ….အေးသီ ခှငျ့ပွုပါ တယျ….” ထိုသို့ အေးသီ၏ စကားကွားရသောအခါ ထှနျးကြျောမှာ ထီပေါကျသညျထကျ ဝမျးသာသှားကာ ” တကယျနျော….အေး သီ….” ” အငျးပါဆိုနေ….” ထှနျးကြျော အေးသီ၏ နို့နှဈလုံးကို အားရပါးရ ကိုငျဆုပျခသြေညျ။ ” အိုး….အဲဒီလို အရမျးညှဈရ လား….ဒီမှာ နာတာပေါ့….” ” အာ….တောငျးပနျပါတယျ အေးသီ….ကိုယျ စိတျလောလို့ပါ….” အေးသီက ပွုံးလိုကျသညျ။ ” အေးသီ….ဒီမှာ လှဲအိပျနျော….” အေးသီ ခုံတနျးလြားပျေါ လှဲအိပျလိုကျသညျ။ ခွထေောကျမှာ ခပျဆငျးဆငျးနသေညျ။ ထှနျးကြျောက အေးသီပါးလေး ကို နမျးသညျ။ ” အေးသီ….ကိုယျ လုပျမယျနျော….” ” အငျး….” အေးသီ မကျြလုံးလေးမှိတျထားသညျ။ လကျမြားက သူမ၏ ကိုယျပျေါမိုးနသေော ထှနျးကြျော၏ ပုခုံးကို ကိုငျထား သညျ။ ပကျလကျလေးလှနျထားသဖွငျ့ မို့မောကျကော့ ထှကျနသေော ရငျသားအစုံက ကွှတကျနသေညျ။ ထှနျးကြျော တံတှေး မြိုခလြိုကျသညျ။ အေးသီ၏ နှိပျကွယျသီးကို ဖွုတျကာ အင်ျ ကြီခြှတျလိုကျသညျ။ အောကျခံရှငျမီးအင်ျကြီလေးမှာ ကွီးမားသော နို့နှဈလုံးကို အသားမြားမမွငျရသညျ့တိုငျအောငျ ဖုံးကှယျ ဝှကျထားသဖွငျ့ ရှငျမီးအင်ျကြီလေးကိုပါ မွနျဆနျစှာ ခြှတျလိုကျသညျ။
အေးသီသညျ ယခုအခြိနျ မိမိ၏ခဈြသူနှငျ့ အလိုးခံရတော့ မညျကို သိသဖွငျ့ ရငျအစုံမှာ လှိုငျးထနသေညျ။ မဆှမီကပငျ ကွှနေ ပွီဖွဈသော သူမ၏ စိတျအစဉျသညျ လှိုကျဖိုမောနပွေီ ဖွဈသညျ။ ထှနျးကြျောက ရှူးရှူးရှားရှားဖွငျ့ အေးသီ၏ နို့နှဈလုံးဖွူဖွူ လေးကို ကိုငျဆုပျညှဈ၏။ တဈခါမှ နို့အုံဆိုသော အသားကို ကိုငျဆုပျဖူးခွငျးမရှိသော ထှနျးကြျောအဖို့ နတျပွညျ၏ စညျးစိမျကို ခံစားနရေသလို ထငျမိသညျ။ အေးသီကလညျး အောကျမှနေ၍ ထှနျးကြျော၏ အင်ျကြီအဖွူရောငျကို ခြှတျပေးလိုကျသညျ။ ညို ထှားသော ရငျအုံအစုံကို အေးသီက လကျဖွငျ့ပှတျသပျပေးသညျ။ ထှနျးကြျော၏ ပုဆိုးအောကျ၌ လီးခြောငျးမှာ တထနျထနျ ပုတျသငျညိုခေါငျးညိမျ့နသေလို ဖွဈနသေညျ။ မိနျးမမြားနှငျ့ အထိအတှေ့ ကို ယခုအခြိနျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈသဖွငျ့ ထှနျးကြျောမှာ အပြျောဆုံးဖွဈကာ ကွညျနူးနလေသေညျ။ အေးသီက ခါးလေးကော့ ကာ ထမိနျကို အောကျသို့ လြော့ခပြေး လိုကျသညျတှငျ စောကျဖုတျဖွူဖွူ မို့မို့လေးမှာ အထငျးသား ဝငျ့ကွှားစှာထှကျပျေါလာ သညျ။ ထှနျးကြျော ဆကျလကျ၍ အခြိနျ မဆှဲတော့ တှနေ့ရေသော စောကျဖုတျအကှဲလေးကို လကျဖွငျ့ပှတျကိုငျကွညျ့သညျ။ စောကျဖုတျလေးမှာ ခြှဲတှဲတှဲ စိုစိစိဖွဈ နသေညျ။ ပေါငျတံလေးမြားမှာ တုပျဖွောငျ့စငျးနသေညျ။
ထှနျးကြျော သူ၏ လုံခညျြကို ခေါငျးမှ ကြျောခြှတျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ လီးမဲမဲကွီးမှာ ဟိုရမျးဒီရမျးဖွငျ့ မတျထောငျနေ သညျကို အေးသီ တှရေ့သညျ။ အေးသီ စောကျဖုတျလေးမှာ လီး၏အနံ့ကွောငျ့ ကွုံ့ကနဲဖွဈကာ စောကျစိလေးမှာ ခပျထနျ ထနျမာလာသညျ။ ထှနျးကြျောသညျ နှားသိုးကွိုးပွတျသလို စောကျပတျအကှဲလေးထဲသို့ လီးခြောငျးကို ဒလစပျထိုးထိုးဆောငျ့ တော့သညျ။ လီးသညျ စောကျဖုတျအပေါကျထဲသို့ မဝငျဘဲ စောကျစိကို ဖိထိုးလိုကျ စောကျဖုတျနံရံ အကှဲနှုတျခမျးကို ခြျောထိုး လိုကျဖွဈနသေညျ။ အေးသီ က တရမျးရမျးဖွဈနသေော ထှနျးကြျော၏ လီးခြောငျးကွီးကို ဆုပျကိုငျကာ ဖငျကိုကော့မွှောကျ ကာ လီးကိုဇကျခြိုးနှိမျ့ပွီး စောကျ ခေါငျးပေါကျလေးသို့ တပေ့ေးလိုကျသညျ။ ” အဲဒါမှ အပေါကျရှငျ့….တကထဲ….မပွောခငျြဘူး….” ဟု ညူစူစူလေးနှဲ့ကာ ပွော လိုကျသညျ။ ထှနျးကြျောက တဟဲဟဲရှကျကိုးရှကျကနျးဖွငျ့ ဖငျကွီးကို ခြိုငျ့ဝငျအောငျ ကော့ဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ လီးခြောငျးသညျ ဦးတညျခကျြရသှားသညျနှငျ့ စောကျဖုတျအတှငျးသားမြားနှငျ့ စောကျဖုတျနှုတျ ခမျးကို အရှိနျအဟုနျပွငျးစှာ ပှတျထိုးသှား၏။
” အငျ့….အှတျ….” ” အား….အေးသီ ရယျ….” ” အား….ကိုထှနျးကြျော အဲသလိုကွီးပဲ မဆောငျ့နဲ့လေ….ကြှနျမ နာတယျ….” နာတယျဟု အေးသီက ရှုံ့မဲ့၍ပွောသောအခါ ထှနျးကြျောမှာ ပြာပြာသလဲဖွငျ့ ” ဒါဆို ဘယျလိုလဲ….ဒီလို ဖွေးဖွေးခငျြးလား….” လီး ကို ဖွေးဖွေးခွငျး သှငျးထညျ့ပွီး ပွောသောအခါ အေးသီက ရှကျရိပျလေးဖွငျ့ ခေါငျးလေးညိမျ့သညျ။ စောကျဖုတျ အတှငျးသား နုနု ရဲရဲလေးမြားက လီးခြောငျးကို ဆှဲအနုတျတှငျ ညှဈညှဈဆုပျပေးထားကွသဖွငျ့ ထှနျးကြျောမှာ ကမ်ဘာခွားတဈ ခုသို့ လှငျ့မြောနေ သလို ခံစားနရေသညျ။ တဖွေးဖွေး ထှနျးကြျော ဆောငျ့ခကျြတှကေ မွနျဆနျလာသညျ။ ” ပွှတျ….ဗွဈ…ဘှတျ….” ” အငျ့….အ… အီး….” အေးသီသညျ တငျးပါးကို ကွှ၍ ပငျ့ဆောငျ့ကော့ပေး၏။ ထှနျးကြျောက လီးကို စောကျခေါငျးထဲအထိ အဆုံးထိဝငျ အောငျ ပဈပဈဆောငျ့၏။ ထိုသို့ ထှနျးကြျော ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ဆောငျ့လိုးခွငျးသညျပငျ အေးသီအတှကျ အငျ့ကနဲ အငျ့က နဲ ခံလို့ ကောငျးနရေသညျ။
ခွထေောကျကိုဆငျးကာ အကွောကို တောငျ့ထားသဖွငျ့ စောကျဖုတျလေးမှာ လီးကို ညှပျစုပျထား သလိုဖွဈကာ အေးသီမှာလညျး ပွီးခငျြလာသညျ။ စောကျစိကို ခပျကွမျးကွမျး တိုကျပှတျသှားလတေိုငျး ကငျြကနဲ ဖငျြးကနဲ ဖွဈကာ ဖငျကွီး ကို အစှမျးကုနျ ကော့တငျပေးလာသညျ။ ထှနျးကြျောမှာ တံတောငျဖွငျ့ထောကျကာ လှကွေီးထိုးလိုးစဉျနှငျ့ပငျ အခကျြ (၄၀)ခနျ့ မနားတမျး ဆောငျ့သှငျးလိုကျရသောအခါ လီးခြောငျးထဲမှ သုတျရညျပူပူနှေးနှေးမြားသညျ စောကျဖုတျလေး ထဲသို့ ပွညျ့လြှံသှား အောငျ ပနျးထုတျလိုကျသညျ။ အေးသီ၏ စောကျဖုတျလေးထဲမှလညျး အရညျမြားထှကျအံလာကာ နှဈ ယောကျလုံး ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ ပွီးသှားတော့သညျ။ ထှနျးကြျောသညျ အေးသီ၏ ကိုယျပျေါသို့ မှောကျရကျသားကသြှား လတေော့သညျ။ အေး သီသညျ အိမျပွနျရောကျသောအခါ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျကွီး အိပျပြျောသှားရတော့သညျ။
ဂပြနျမာစတာကွီးသညျ ငဘအား ခြီးကြူးကာ ဝမျးသာအားရဖွငျ့ ” ငဘ မငျးသိပျတျောတယျ….ဒီနကေ့စပွီး မငျးကို ငါရာထူးတဈခု ပေးမယျ….” ထိုသို့ပွောသံကွားရသောအခါ ငဘမှာ ဝမျးသာအားရဖွငျ့ ” ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ မာစတာကွီးရာ….ဟိုကျ…မာစ တာကွီးအတှကျ ငဘက အရာရာအသငျ့ပါ….” ” အေး…အေး…ဟား….ဟား….ငဘရ အေးသီရဲ့ စောကျဖုတျလေးက လိုးလို့ ကောငျးလိုကျတာကှာ…မငျးတို့ မွနျမာ မတှကေ စောကျဖုတျ အရမျးကောငျးတယျ….” ” ဟီး…ဟီး….သိပျကောငျးတယျ….” အမှနျတော့ ငဘသညျ အေးသီကို အရငျဦးဆုံး ပါကငျဖှငျ့လိုကျသူဖွဈသညျ။ ငဘပွီးမှ မာစတာကွီးက အေးသီကို လိုးရခွငျး ဖွဈသညျ။ ငဘအရငျ အေးသီကို လိုးသညျကို မာစတာကွီးက မသိခြေ။ ထနျးတောထဲတှငျ ဂပြနျမာစတာကွီးနှငျ့ ငဘမှာ အပေးအယူမြှကာ အောငျပှဲခံနကွေသညျ။ မြိုးစဈတဈယောကျ ဒဏျရာမြား ပြောကျကငျးသောအခါ ရှာကမျးခွတေဈလြှောကျ လှဖွေငျ့ ငါးဖမျးရနျ ထှကျလာခဲ့ သညျ။ မြိုးစဈလှကေို အသာလှျောခတျကာ ပိုကျခလြိုကျသညျ။
လမုတောကမျးဘကျသို့ လှကေို ဦးတညျလိုကျသညျ။ နောကျ တဈညလုံး ပိုကျ၌မိသော ငါးမြားကို ဖွုတျရမညျဖွဈသဖွငျ့ လမုတောစပျ၌ ဗြိုငျးထောငျခြောကျသုံးခု ကို ခလြိုကျသညျ။ ဗြိုငျး ထောကျခြောကျဆိုသျောလညျး ရကွေကျနှငျ့ အခွားငှကျမြားလညျး မိနိုငျသညျ။ နသေညျ ပငျလယျအောကျ သို့ တဖွေးဖွေး ငုတျလြှိုးသှားသညျ။ လရောငျသညျ ထငျးထငျးလေး ထှကျပျေါလာသညျ။ ကိုငျးတောမြားကို လကေ တသုနျသုနျဝှေ့ တိုကျ သညျ။ လနှေငျ့အတူ သီခငျြးသံကို နားထောငျမိသညျ။ ” မေ…..မှာ…အားငယျခဈြအားပို….ညူစူလို့ စိမျး…..စိမျးရကျတဲ့ မောငျရယျ…..ယိမျးနှဲ့ကာ တပငျကိုကူး…..မောငျမဲ့ သော သစ်စာဆူး…..ဆူး…..မရေ့ငျကို လာလာ ဆူး….ဆူး….” သာယာသော သီခငျြးသံကို လှငျ့ပြံ့စှာကွားရသောအခါ မြိုးစဈ အံ့သွသှားမိသညျ။
ဤလမုတောထဲ၌ တှရေ့၊ ကွားရ ခဲသော အသံဖွဈသညျ။ အသံလာရာသို့ ကိုငျးတောမြားကွားမှ မြိုးစဈ ခွသေံလုံစှာ လှမျးလာခဲ့သညျ။ တဲအိမျလေးမှ မီးခှကျ မီးအရောငျကို တှရေ့သညျ။ တဲ အိမျလေးနားသို့ တိုးလြှောကျသှားသညျ။ ” ဝုတျ….ဝုတျ…..ဝုတျ…..” ” အား…..” ” ဟဲ့….ရနျလုံ….ဟဲ့ ဟဲ့ ရနျလုံ မကိုကျရ ဘူး….အို….အို့ အို့….လာလာ ရနျလုံ….” ရနျလုံဆိုသော ခှေးကွီးမှာ ဘယျက ဘယျလိုရောကျလာမှနျးမသိဘဲ တဲအနီးသို့ကပျလာ သော မြိုးစဈကို ပိုငျပိုငျနိုငျ နိုငျကွီး ကိုကျလိုကျသညျ။ မထငျမှတျပဲ ဝငျလာသော ခှေးကွီးကို မြိုးစဈပွနျ၍ မခုခံနိုငျတော့ မြိုးစဈ ခွသေလုံးမှ ရနျလုံ၏ အစှယျရာကွောငျ့ သှေးမြားစိမျ့ယိုကလြာသညျ။
” ရှငျ….ဘာဖွဈသှားလဲ….ဟငျ….ဟငျ….သှေးတှေ အမြားကွီးပါလားဟငျ….” အသံရှငျမိနျးမပြိုသညျ မြိုးစဈအနီးသို့ရောကျလာပွီး မြိုးစဈကိုမေးသညျ။ မြိုးစဈ ခေါငျးမော့၍ မိနျးမပြိုကို ကွညျ့မိ သညျ။ မိနျးမပြိုမှာ လှပသညျ။ ညိုသောညကျသော အသားအရရှေိပွီး ရငျအစုံတငျပါး ခါးတို့နှငျ့ အရပျအမောငျးမှာ အခြိုးအ စားကနြစှာ သူ့နရောနှငျ့သူ တငျ့တယျလှပလှသညျ။ ” ကြုပျက တံငါသညျပါ….ဒီတောမှာ ဗြိုငျးထောငျမလို့ မငျးက ဘယျကဘယျလို အရငျက ဒီမှာမတှဖေူ့းပါဘူး…..” မိနျးမပြိုသညျ မြိုး စဈကို သခြောကွညျ့ကာ ” အရငျက ဒီမှာမရှိဘူး…..ကြှနျမမှာ အခုအလုပျကိစ်စနညျးနညျးရှိလို့ ဒီမှာတဈပတျတိတိနရေမှာ….” ” ဒါ ဆို….မငျး….သှေးရဲ့အကွောငျးကို သိလား….” ” ရှငျ….အျော….သှေးရဲ့အကွောငျးကို သိပါတယျ….” ” ဒါဆို မြိုးခဈြပုဂ်ဂိုလျတှေ အကွောငျး သိလား….” ” သိပျသိတာပေါ့….မြိုးခဈြပုဂ်ဂိုလျတှကေ သှေးရဲကွတယျ….” ထိုသို့ မိနျးမပြို၏ ပွနျပွောမှုကွောငျ့ မြိုး စဈမှာ အံ့သွစှာ ” ဒါဆို….မငျးက သှေးသောကျရဲဘျောတဈယောကျပေါ့….ဟုတျလား…..” အမှနျ သှေးအကွောငျးကို စကားဝှကျ ဖွငျ့ မြိုးစဈက မေးခွငျးဖွဈသညျ။ မိနျးမပြိုသညျ သှေးသောကျရဲဘျော အဖှဲ့ဝငျ ဖွဈသညျ။
” ဟုတျတယျ….သခငျဘညှနျ့တို့ ဒီမှာ လာလိမျ့မယျ….ကြှနျမ တဈပတျလောကျ ကွိုစောငျ့နတော….ကဲလာပါ….ရှငျ့ ဒဏျရာ သှေးအရမျးထှကျနတေယျ….ကြှနျမ ဆေး ထညျ့ပေးမယျ….လာလေ….တဲထဲကို….အို…မလေို့ ကြှနျမတှဲချေါပေးမယျ …..” မြိုးစဈကို တှဲ၍ မိနျးမပြိုက တဲဆီသို့ချေါလာသညျ။ မြိုးစဈ၏ ခွသေလုံးမှ ဒဏျရာကို ဆေးထညျ့ပေးရငျး ” ရှငျကရော ဘယျသခငျလကျအောကျကလဲ…..နာမညျကရော ဘယျလိုချေါ သလဲ…..” ” ကြုပျနာမညျ မြိုးစဈ ပါ….သခငျလှဆောငျရဲ့ အထူးပြောကျကြား စနညျးနာအဖှဲ့ကပါ….” ” အျော….မြိုးစဈတဲ့ လား….တှရေ့တာဝမျးသာပါတယျ…..” ” ကြှနျမနာမညျက နနျးမူတဲ့….ကြှနျမတို့က စျောဘှားမြိုးရိုး….” ” အျော….စျောဘှားမြိုးရဲ့ နနျးမူ ကိုး….” သူမ မြိုးစဈကို သခြောစိုကျကွညျ့သညျ။ မြိုးစဈနှငျ့ မကျြလုံးခွငျးဆုံသညျ။ ” ရှငျ ဒီမှာ ဘာလာလုပျတာလဲ….” ” ကြုပျ ငါးဖမျးဖို့ လာတာမဟုတျဘူး….သခငျလှဆောငျက ဒီမှာခငျဗြားနဲ့အတူ သူ့ကိုစောငျ့နဖေို့ လှတျလိုကျတာ…..” ” အို…..ဒါဆို ကောငျးတာပေါ့….ကြှနျမလညျး ဒီတဲထဲမှာ တဈယောကျထဲ ရှငျပါရှိတော့ အဖျောရတာပေါ့….” နနျးမူက အိမျနောကျဘကျသို့ဝငျကာ ရနှေေးပနျးကနျကို ခပြေးသညျ။
ထနျးလကျြမြားကို ပနျးကနျပွားဖွငျ့ ထညျ့လာ ၏။ ” ရှငျ ရနှေေးနဲ့ ထနျးလကျြလေး စားလိုကျ ဦးလေ….” ” ကြေးဇူးပဲ နနျးမူ….” ” ဒါနဲ့…အိပျယာက တဈခုထဲရှိတယျ….” ” ရပါတယျ….ကြုပျဖွဈသလို အိပျပါ့မယျ….ကြုပျ ပိုကျထောငျထားသေးတယျ…..အဲ့ဒါတဈညလုံး အိပျလို့မရဘူး…. နနျးမူ အိပျပါ….ကြုပျစောငျ့ပေးမယျ….” နနျးမူက ပွုံးသညျ။ ပါးခြိုငျ့လေး ပွားခှကျဝငျသှားသညျ။ ရငျသားအစုံမှာ ရှသေို့ပွူးကော့မောကျထှကျနသေညျ။ ကြုံ့ ထိုငျထားသောကွောငျ့ ပေါငျတနျ ဆငျးဆငျးနှငျ့ တငျသားမြားကို တငျးရငျးစှာ တှရေ့သညျ။ နနျးမူက ထသှားသညျ။ ” နနျးမူ မအိပျခငျြဘူး….ဒီလိုလုပျ ရှငျနဲ့ လိုကျခဲ့ မယျလေ….” မြိုးစဈကို ရှနျးဝစှောကွညျ့၍ ပွော၏။ မြိုးစဈ ရငျတှခေုနျသှားရသညျ။ ” ကောငျးပွီလေ….လိုကျခဲ့ပေါ့….” မြိုးစဈ လှကွေိုးကို ဖွုတျလိုကျသညျ။ နနျးမူက လှဦေး၌ ထိုငျ၏။ ပိုကျ၌ မိနသေော ငါးမြားကို လိုကျ၍ဖွုတျသညျ။ အပွနျတှငျ လှဝေမျး ထဲ၌ ငါးတျောတျောမြားမြား ရလိုကျသညျ။ မြိုးစဈက လှယျအိတျထဲမှ ခကျြအရကျပုလငျးကို မော့သောကျသညျ။
” ရှငျ….အရကျသောကျတတျတယျနျော….” ” အငျး….ကြုပျက ကနျြးမာရေးအတှကျလောကျပါ….” လှဝေမျးထဲ၌ ငါးမြားကို ပလိုငျးကွီးထဲတှငျထညျ့ကာ မြိုးစဈတို့ ယာတဲလေးဆီသို့ ပွနျလာခဲ့သညျ။ ယာတဲ၌ မီးအိမျအ လငျးရောငျသညျ လငျးတလကျလကျ လှပနသေလို နနျးမူမှာ တမြိုးတဖုံလှပနသေညျ။ ” ရှငျ….ငါးကငျစားမလား….ကြှနျမ ကငျပေးမယျလေ….အရကျနဲ့ မွညျးပေါ့….” ” ဟာ….ဟုတျတာပေါ့….တကယျပဲ….ကောငျးတယျ…..” နနျးမူက မြိုးစဈကို မကျြစောငျးလေးလှပစှာ ထိုးကာ ပလိုငျးထဲမှ ကကျ ကတဈငါးတဈကောငျကိုယူ၍ မီးဖိုဖို၍ ကငျ လတေော့သညျ။ ခဏကွာသောအခါ မှေးပြံ့သော ငါးကငျအနံ့ကို မြိုးစဈ ရှူရှိုကျ မိသညျ။ နနျးမူက ပနျးကနျပွားတဈခပျြနှငျ့ ဖနျခှကျမြားကို ယူလာပေးသညျ။ ” ကဲ….စားရငျး သောကျပတေော့….” ” ကြေးဇူးပဲ နနျးမူ….” နနျးမူကို စိုကျကွညျ့ရငျး မြိုးစဈ ပွောလိုကျသညျ။ နနျးမူက ပွုံးကာ သူ့ကို စူးစူးရဲရဲ ပွနျစိုကျကွညျ့သညျ။
ငါးကငျကို ဖဲ့ စားရငျး ” ရှငျ မွညျးကွညျ့လေ….ကောငျးသှားမှာ….” မြိုးစဈက ဖနျခှကျထဲ ခကျြအရကျကို ထညျ့ပွီး မော့သောကျကာ ငါးကငျကို တဖဲ့ကိုကျဝါးရငျး ” အား….ခြိုလိုကျတာ….ကောငျးတယျ….နနျးမူ….အရမျးကောငျးတာပဲ….” ” ကဲပါ…သိပျမွှောကျမနနေဲ့ ဦး….နောကျထပျ သှားကငျလိုကျဦးမယျ….” ထိုသို့ ခဈြစဖှယျပွနျပွောကာ ထသှားသော နနျးမူကို ရငျတမမဖွငျ့ မြိုးစဈကွညျ့ကာ သကျပငျြးခလြိုကျသညျ။ တငျသားမြား အနိမျ့အမွငျ့ တုနျခါသှားသော နနျးမူ၏ နောကျပိုငျးအလှမှာ မြိုးစဈအတှကျ ပွဈမှားခငျြစရာ ဖွဈနသေညျ။ မြိုးစဈ စိတျကို တခွားလှဲပဈလိုကျသညျ။ ထကွှလာသော စိတျကို ခြိုးနှိမျလိုကျပွီး အရကျကို ဖိသောကျသညျ။ ငါးကငျကို စားကောငျး ကောငျးနှငျ့ စားလိုကျရာ ခေါငျးပိုငျးနှငျ့ အရိုးသာ ကနျြတော့သညျ့အခြိနျတှငျ နနျးမူက နောကျထပျ ငါးကငျ တဈကောငျကို ကငျပေးပွနျသညျ။ မြိုးစဈသညျ ခကျြအရကျအရှိနျကွောငျ့ ရီဝလောသညျ။ နနျးမူကို အကွာကွီး စူးရဲစှာ စိုကျကွညျ့သညျ။ နနျးမူက ရဲတငျးစှာ ပွနျကွညျ့၏။ ” နနျးမူလညျး စားလေ….” ” အငျး….စားမှာပေါ့….” ဟူ၍ ပွောကာ ငါးကငျ ကို ဖဲ့စားသညျ။ ပွီးနောကျ အရကျပုလငျးကို ကိုငျကာ အရကျငှဲ့ပေးသညျ။
မြိုးစဈက ရေ တောငျမရောဘဲ နနျးမူ ငှဲ့ပေးသောအရကျ ကို မော့သောကျလိုကျသညျ။ နနျးမူက အဆငျသငျ့ ငါးကငျကို ဖဲ့ပေး၏။ မြိုးစဈတဈ ယောကျ စညျးစိမျတှနေ့ရေသညျ။ ထို့အပွငျ ပွငျးရှသော ခကျြအရကျအရှိနျကွောငျ့ အတျောကို မူးနပွေီဖွဈသညျ။ ” ကြုပျ….မူးလာပွီ….နနျးမူ….ကြုပျ အရမျးမြားသှားပွီ….” ” ဟငျ….ဟုတျလား….ဒါဆိုလဲ ရှငျ အိပျနလေိုကျလေ….” မြိုးစဈ တုံးလုံးလှဲကာ အိပျပြျောသှားတော့သညျ။ နနျးမူက မြိုးစဈ၏ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအဆဈကို သခြောစှာ ထိုငျကွညျ့ နသေညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ မြိုးစဈ၏ ပေါငျကွားမှ လီးခြောငျးကွီးမှာ ထနျကနဲ ထောငျမတျလာသညျကို နနျးမူ တှလေို့ကျသညျ။ နနျးမူ မကျြလုံးလေး ပွူးကယျြသှားရသညျ။ ” ဟှနျး….အိပျနတောတောငျ ဟိုဟာ က ထောငျနသေေးတယျ….” နနျးမူ ထိုသို့ပွောကာ ပုဆိုးအောကျ၌ ထောငျမတျနသေော လီးတနျကွီးကို မမှိတျမသုနျ စိုကျကွညျ့၏။ ကွညျ့နရေငျး စိတျထဲ၌ မရိုးမရှဖွဈလာကာ တငေါကျငေါကျထောငျနသေော လီးကိုကိုငျကွညျ့ခငျြလာသညျ။
” ကိုမြိုးစဈ….ကို မြိုးစဈ….” ဟူ၍ မြိုးစဈကို သှေးတိုးစမျးကာ ချေါကွညျ့သညျ။ မြိုးစဈက တုတျတုတျမှမလှုပျ မိနျးမတို့မညျသညျ ဆိတျကှယျရာ လူသူရှငျးသော တိတျဆိတျသောနရောအခြိနျ၌ စိတျသညျ ဖောကျပွနျတတျကွသညျမှာ ဓမ်မတာပငျဖွဈသညျ။ နနျးမူ စိတျတှေ လှုပျရှားရုနျးကွှလာသညျ။ အာခေါငျမြား ခွောကျသှကေ့ာ တံတှေးကို တဈခကျြမွိုခမြိသညျ။ နနျးမူ အတှေးကို စဉျးစားသုံးသပျ မိ၏။ မိမိသညျ မြိုးစဈ အိပျပြျောနခြေိနျအတှငျး တကျ၍ လုပျခဲ့သျော မနိုးရငျကောငျး၏။ နိုးခဲ့ပါက မိနျးမတနျမဲ့ အရှကျကှဲရပေ လိမျ့မညျ။ သူမခေါငျးထဲသို့ အကွံတဈခု ဝငျရောကျလာခဲ့သညျ။ မြိုးစဈအား အတငျးလကျဆှဲကာ နှိုးမညျ။ နိုးလာသောအခါ အိပျဆေးထညျ့ထားသော အရကျကို တိုကျမညျ။ ထိုအခါကမြှ မိမိအနဖွေငျ့ စိတျခလြကျခြ ဆန်ဒကို ဖွဖြေောကျနိုငျလိမျ့မညျ။ နနျးမူ သူမ၏ အကွံအတိုငျးပွုလုပျကာ မြိုးစဈကို လှုပျနှိုးသညျ။
” ကိုမြိုးစဈ….ကိုမြိုးစဈ….ကိုမြိုးစဈ….” ” ဟငျ…ဟငျး….ဘာ လဲ…..ဟငျ….” ” ရှငျ….မူးနတောလား….အိပျပြျောသှားတာလား….” အရကျမူးသူတိုငျး မူးသညျဟု မညျသူမြှမပွော ထို့အတူ ခိုး သူတိုငျးလညျး ခိုးသညျဟု ဘယျသောအခါမြှ မပွောတတျ သော မူအတိုငျး မြိုးစဈသညျ ” ဟငျ….အငျး….ဟာ….ဘယျ့နှယျ….ကြုပျ မူးရမှာလဲ….ခဏအိပျပြျောသှားတာပါ….” နနျးမူသညျ အိပျဆေးထညျ့ထားသော အရကျ ခှကျကိုယူ၍ မြိုးစဈထံ ကမျးပေးလိုကျသညျ။ ” ရော့….ဒါအကုနျသောကျလိုကျလေ….ဘာဖွဈလို့ ခနျြထားတာလဲ….” ” အငျး….ပေး….” မြိုးစဈ တကှတျကှတျ အရကျကို မော့ခသြညျ။ နနျးမူက ငါးကငျတဖဲ့ကို လှမျးပေး၏။ မြိုးစဈက ငါးကငျကို မကျြစိ မပှငျ့ တပှငျ့ဖွငျး ဝါးရငျး ခေါငျးအုံးပျေါသို့ လှဲလိုကျသညျ။ ငါးမိနဈခနျ့ကွာသောအခါ တခူးခူးဖွငျ့ အိပျပြျောသှားပတေော့သညျ။ နနျး မူသညျ စိတျခလြောကျသညျ့အနအေထားတှငျ သူ၏လုပျငနျးကို စပတေော့သညျ။
ပထမဆုံး မြိုးစဈ၏ လုံခညျြကို ခါးပျေါ အထိ လှနျတငျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ ကဈြလှဈပွီး ကွှကျသားမြားဖွငျ့ တညျဆောကျထားသော မြိုးစဈ၏ ပေါငျတံညိုညိုကို တှရေ့သညျ။ ဆီးစပျအမှေးမြားမှာ ခြုံပုတျငယျတဈခုလို ရှုပျထှေးသနျမာနသေညျ။ ပြော့ခှနေသေော လီးခြောငျးကွီးမှာ ဇကျ ကြိုးကနြသေော မွှေ ကွီးတဈကောငျနှယျရှိ၏။ နနျးမူ လီးပြော့ကို လကျဖွငျ့ဆုပျနယျကိုငျကွညျ့၏။ ယောကျြားကွီးတဈ ယောကျ၏ လီးကို ပထမဦးဆုံး ကိုငျရသညျ့အခြိနျမှာ နနျးမူ ရငျခုနျနရေသညျ။ တဖွညျးဖွညျး မြိုးစဈ၏ လီးမှာ နနျးမူ၏ လကျ ထဲတှငျ ထနျမာလာပွီဖွဈသညျ။ နနျး မူ အသညျးယားလာသညျ။ လီးကွီးမှာ နြူကလီးယားထိပျဖူးကွီးနှယျ တငျးပွောငျလာ သညျ။ ယောကျြားတို့ သဘာဝမှာ အိပျနေ သျောလညျး လီးမှာ တောငျနတေတျကွသညျ။
နနျးမူ မြိုးစဈခါးပျေါသို့ ကားယားခှ လိုကျသညျ။ စောကျပတျလေးမှာ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျဖွဲထားသဖွငျ့ နှုတျခမျးသားနှဈလှာမှာ ပွဲဟဟလေး လနျတကျနသေညျ။ နနျးမူ တံတှေးတဈခကျြ မွိုခလြိုကျ သညျ။ စောကျပတျထဲမှ ယားကြိကြိဖွဈလာသညျ။ မြိုးစဈ၏ လီးကို ဖငျဆုံကွှ၍ လကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျကာ စောကျခေါငျးပေါကျဆီသို့ တသှေ့ငျးလိုကျသညျ။ လီးဒဈထိပျဖူးသညျ တငျပါးကို တဈရဈရဈ ဖိခနြှဲ့သှငျးလိုကျ ခွငျးကွောငျ့ ဗွဈဆိုသညျ့ မွညျသံနှငျ့အတူ တ ဝတျတိတိ စိုကျဝငျသှားသညျ။
” အ….ကွီးလိုကျတဲ့ လီး….” ဤသို့ နနျးမူသညျ ညညျးတှားလိုကျပွီး ရှသေို့လကျထောကျကာ ကိုယျကိုကိုငျး၍ ဖွညျးဖွညျးခွငျး ဖငျ ကို နှိမျ့ခလြိုကျ ပွနျဆှဲတငျလိုကျ လုပျ၏။ စောကျပတျလေးမှာ လီး၏ ဝငျထှကျမှုကွောငျ့ ပွဲအာသှား၏။ လီးကိုဖိ၍ သှငျးလိုကျခြိနျ စောကျပတျ နှုတျခမျးနှဈလှာမှာ တံခါးလေးစိသှားသလို စုကပျသှားကွသညျ။ လီးတနျက စောကျခေါငျးပေါကျ အပျေါထိပျ၌ မကျြရညျစကျ လေးနှယျတငျတှဲကပျကာရှိနသေော စောကျစိလေးကို ထိပှတျထိုးသှားသညျ။ နနျးမူတဈယောကျ အကွောအခဉျြမြား တ ဆတျဆတျ လူးလာရသညျ။ လီး၏ အထိအတှသေ့ညျ ဤမြှလောကျ မကွုံစဖူးသော ခံစားမှုအရသာဖွဈနေ၏။ စိတျအာရုံ သညျ လှတျထှကျသှားသညျ။
သူမသညျ ကိုယျလေးကိုငျးကာ တငျပဆုံအား နောကျသို့ပဈဆောငျ့ခလြိုကျရငျး စောကျပတျထဲ မှ ခြှဲကြိ သော အရညျကွညျလေးမြား ထှကျကလြာသညျ။ ထိုသောအခါမှ ကွမျးတမျးသော ခံစားမှုမှာ တဖွညျးဖွညျး နူးညံ့သိမျ မှလေ့ာ တော့သညျ။ ” ဟငျး….အငျး….” ” ပွှတျ…ဗွဈ…ပလှတျ…ဘှတျ…ပွှတျ….ပလှတျ…ဘှတျ….ဗွဈ….ပွှတျ….” ” အား….ဟငျး….” နနျးမူသညျ ဆောငျ့ခမြှုမှာ တဖွညျးဖွညျး မွနျဆနျလာသညျ။ တငျပဆုံကို နှဲ့လိုကျ ဆောငျ့ခလြိုကျဖွငျ့ နနျးမူမှာ လီးဝငျ လီးထှကျသှား တိုငျး တဟငျးဟငျးဖွဈကာ အသကျရှုနှုနျးမြား မွနျဆနျလာသညျ။ စောကျပတျလေးမှာ ထူးခွားဆနျးပွား သော အရသာထူးတဈရပျ မှာ ဆကျတိုကျဖွဈပျေါနသေညျ။ တငျပါးဆုံကားကားကွီးမှာ ဖိဆောငျ့ခလြိုကျတိုငျး အိတုနျခါသှား ကွသညျ။ မြိုးစဈမှာ ဆနျ့ဆနျ့ ကွီးပငျ တခူးခူးဖွငျ့ အိပျပြျောနရှောသညျ။ နနျးမူသညျ ကိုယျကိုကိုငျး၍ မြိုးစဈ၏ ရငျဘတျပျေါ သို့ ပါးအပျလိုကျသညျ။
သူမ၏ နို့နှဈ လုံးသညျ ဖိကပျပွားသှားသညျ။ နနျးမူသညျ ကားပွဲနသေော ခွနှေဈခြောငျးကိုစု၍ ကိုယျ ခွငျးထပျ ဖိကာ ဖငျကိုကော့၍ ဆောငျ့ခြ၏။ ” ဘှတျ…ပလှတျ….ပွှတျ….ဗွဈ….ဗွဈ…ဘှတျ….ပွှတျ….ဘတျ….ဘတျ….” ခပျပွငျးပွငျး ဆောငျ့ခကျြသညျ နနျးမူ၏ သားအိမျခေါငျးကို ထိသှားသညျ။ နနျးမူ ကငျြကနဲ အောငျ့သကျသကျဖွဈ သှားသညျ။ ထိုအောငျ့သကျသကျ အရသာပငျ ထူးခွားသောအရသာမြား ပေါငျးစပျပါဝငျနပွေနျ၍ လီးသညျ စောကျခေါငျးထဲ သို့အဆုံးအထိ ဝငျစရေနျ ဆောငျ့ဆောငျ့ခလြိုကျ သညျ။ ယခုကဲ့သို့ စိတျရှိတိုငျး လိုးဆောငျ့ခနြရေခွငျးတှငျ နနျးမူသညျ ထူးခွားသော အာရုံအထိအတှမြေ့ားဖွဈပျေါလာပွနျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဘလောကျရငျဖုံးအင်ျကြီကို ခြှတျပဈလိုကျသညျ။ နို့ လေးနှဈလုံးမှာ လုံးဝနျးကာ ဘှားကနဲ ထှကျပျေါလာသညျ။ ပုခုံးလေး ကို အနညျးငယျစောငျးရငျး သူမဘာသာ နို့တဈလုံးကို ညှဈဆုပျပှတျသပျလိုကျသညျ။ နို့အုံကို အရငျးမှပငျအဖြားအထိ ပငျ့ဆုပျကိုငျ ပွီး နို့သီးခေါငျးလေးအား စောကျပတျထဲသို့လီးကို ဆောငျ့သှငျးလိုကျတိုငျး မြိုးစဈ၏ ရငျဘတျဖွငျ့ ပှတျသပျထိနစေသေညျ။
နို့သီး ခေါငျးမှ အကွောဆုံသညျ ခံစားမှုအရသာတဈ ရပျကို ပေးပွနျသညျ။ နနျးမူသညျ ဖငျဆုံမှ အကွောမြား ခြိုငျ့သှားအောငျ စောကျ ပတျဖွငျ့ လီးကွီးကို ညှဈပှတျဆှဲကာ ဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ ဆောငျ့ခကျြမှာ မွနျဆနျလာရာမှ တဖွေးဖွေးနှေးလာကာ ခွထေောကျ နှဈခြောငျးအား ဆနျ့ကာ မြိုးစဈ၏ လီးမှေးအုံထူကွီးနှငျ့ သူမ၏ အမှေးမြားဖိကပျပှတျသံ၊ လီးဝငျထှကျသံသညျ တဗွဈဗွဈ တဗွငျး ဗွငျး မွညျနသေညျ။ နနျးမူသညျ စောကျပတျအတှငျး မှ လြှပျစဈဓာတျတဈမြိုးထှကျပျေါလာသလို ဖငျကို အောကျဆုံးအထိ နှိမျ့ခပြွီး ဖွေးဖွေးခငျြး ပှတျလိုးသှငျးလိုကျသောအခါ စိတျအစဉျသညျ တလှပျလှပျဖွဈသှားကာ စောကျပတျထဲမှ ဖျောမပွနိုငျသော ခံစားမှု ပေါငျးမြားစှာဖွဈပျေါလာပွီး သူမသညျ အရညျမြားကို စောကျပတျထဲမှ ညှဈထုတျလိုကျတော့သညျ။ နနျးမူ ပွီးသှားရသညျ။ နနျးမူ သညျ မလှုပျခငျြတော့။ ကာမ၏ အရသာကို တစိမျ့စိမျ့ကွီး ခံစားလိုကျရသညျ။ မြိုးစဈ၏ ပါးပွငျကို နမျးရှုံ့၍မှေးလိုကျသညျ။ ” ကို မြိုးစဈရယျ….ရှငျနဲ့သာဆိုရငျ….ကြှနျမ စိတျတူကိုယျတူ ခဈြခငျြပါသေးတယျ….” ဟူ၍ ပွောလိုကျတော့သညျ။
မြိုးစဈသညျ မနကျ (၃)နာရီတှငျ နိုးလာခဲ့သညျ။ သူနိုးလာတော့ အပွငျးဆနျ့သညျ။ အပေါ့သှားခငျြလာသဖွငျ့ အိမျ နောကျဖေးဘကျသို့ ခွသေံဖှဖှ ဖွငျ့ သှားသညျ။ ဓနိသာကာရံထားသော အခနျး၌ နနျးမူသညျ အိပျမောကလြကျြရှိသညျ။ မြိုးစဈသညျ နနျးမူကိုမွငျတော့ ကွကျသီး မြားပငျ ထသှားမိသညျ။ နနျးမူသညျ ထဘီကိုရငျလြားထားပွီး အိပျပြျောနသေညျ။ သို့သျော ထဘီမှာ ပွလြေော့နကော ရငျသားအစုံ မှာ တခြို့တဝကျ လှဈပျေါနသေညျ။ ပကျလကျလေး အိပျပြျောနသေဖွငျ့ ထဘီအောကျ၌ အခုအခံမရှိသော အသားစိုငျမြားမှာ အထငျးသားပျေါလှငျနသေညျ။ ဗိုကျသားခပျြခပျြလေးမှာ ပူလိုကျဖောငျး လိုကျဖွဈနသေညျ။ စောကျပတျနရော၌ V ပုံသဏ်ဍာနျ ရေးရေးမွငျရသညျ။ ထိုနရော၌ ထဘီသညျ အကှကျကှကျကာ စှနျး ထငျးနသေညျ။ တောငျ့တငျးလှသော ပေါငျတံစငျးစငျးလေးမှာ မြိုးစဈ၏ ရမ်မကျမီးကို ဟုနျးကနဲ “ထ” တောကျစသေညျ။ မြိုးစဈ သူ၏လီးကို လကျဖွငျ့ညှဈဆုပျထားမိသညျ။
လီးသညျ ဦးနှောကျမှ စဆေ့ျောမှုကွောငျ့ လီးခြောငျးအတှငျး သှေးမြား အဆကျမပွတျတိုးကာ လီးသညျ တောငျမာလာသညျ။ မြိုးစဈသညျ စိတျကို တငျး လိုကျသညျ။ အိမျနောကျဖေး၌ သေးထိုငျ ပေါကျလိုကျသညျ။ လီးသညျ ထူးခွားစှာ စေးကပျကပျဖွဈနသေညျကို သူ ကိုငျတှယျ မိသညျ။ ထို့ပွငျ ဂှေးဥနှငျ့ ပေါငျခွံမြားတှငျ လညျး စေးကပျကပျအရညျမြားပကြေံနသေညျ။ မြိုးစဈ မကျြမှောငျကွုတျကာ စဉျးစား၏။ ဤအရညျမြား မိမိဆီက ထှကျသညျ လား၊ ဒါလညျး မဖွဈနိုငျသေး။ သူလကျနှငျ့ သုတျယူကာ နမျးကွညျ့သညျ။ ညှီစို့စို့ အနံ့ကိုရသညျ။ မြိုးစဈ ကွောငျသှားရသညျ။ တခဏ မှငျသကျသှားသညျ။ မိမိအိပျပြျောနခြေိနျ သုတျလှတျခွငျး၊ သုတျထှကျခွငျး မ ဖွဈနိုငျပေ။ နနျးမူ….နနျးမူကမြား မြိုးစဈ ရရောတိကစြှာ ဘာတဈခုမြှ စဉျးစားလို့မရပေ။ တဲပျေါသို့ ပွနျတကျလိုကျသညျ။ နနျးမူက နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောနဆေဲ၊ မြိုးစဈ နနျးမူ၏ ထဘီလေးကို ပေါငျအရငျးအထိ လှနျတငျလိုကျသညျ။ စောကျပတျအကှဲလေးကို မွငျရ သညျ။ ထိုအကှဲလေးမှ အရညျ တခြို့သညျ ဖငျအကှဲလေးအတိုငျး စိမျ့ကနြသေညျ။
မြိုးစဈ အခွအေနအေဖွဈမှနျကို သဘောပေါကျ လိုကျသညျ။ ထို့အတူ နနျးမူမကျြနှာလေးအား အံ့သွစှာကွညျ့မိသညျ။ နနျးမူသညျ မိမိ၏ အရကျခှကျ၌ အိပျဆေးကို ကွိမျးသထေညျ့ တိုကျမညျ။ ထို့ နောကျ သူမ မိမိအိပျဆေးကွောငျ့ လူမှနျးသူမှနျးမသိ အိပျပြျောနခြေိနျတှငျ စိတျလှုပျရှားကာ တကျလုပျခဲ့ပမေညျ။ မြိုး စဈ ပွုံးမိ သညျ။ နနျးမူ၏ လှဈပျေါနသေော နို့အုံကို မဖုံးတဖုံးလေး ဖုံးထားသော ထဘီစကို ဗိုကျသားအထိ ဆှဲခလြိုကျသညျ။ ထဘီ လေးသညျ အောကျစရော အပျေါစပါ ဗိုကျသားပျေါ၌ စုတငျသှားကွသညျ။ နို့အုံလေးမြားသညျ နမေထိသဖွငျ့ ဖွူဥနုရှနေ သညျ။ ပကျလကျလေး အိပျနသေဖွငျ့ တှဲပုံအိနသေညျ။ မြိုးစဈ ဆကျလကျ၍ စိတျမထိနျးခြုပျနိုငျတော့ သူသညျ သှေးသားနှငျ့ တညျဆောကျထားသော ပုထုဇဉျတဈယောကျဖွဈသဖွငျ့ နနျးမူ၏ ပေါငျလေးနှဈဖကျကို ဖွဲခှဲလိုကျသညျ။ ထိုပေါငျကို ကှေး၍ ထောငျစလေိုကျပွီး စောကျပတျအပေါကျလေးထံသို့ သူ၏ လီးဒဈကို ဖိသှငျးခလြိုကျသညျ။ လီးသညျ တဈခကျြတဈသှားပွီးမှ နောကျတဈခကျြ ဖိသှငျးလိုကျကာမှ လီးခြောငျးတဈခြောငျးလုံး စောကျပတျထဲသို့ ပွညျ့သိပျကပျြတညျးစှာ အဆုံးအထိ ဝငျ ရောကျ သှားပသေညျ။
နနျးမူ၏ ခွနှေဈခြောငျးကို ကားကားလေး ဆနျ့၍ပွနျထားလိုကျသညျ။ သုံးလေးခကျြ ဖိဆောငျ့သှငျး လိုကျသညျ။ လီး တဈခြောငျးလုံး စောကျပတျအသားနုနုလေးကို ဖိပှတျ တိုးဝငျသှားလတေိုငျး မြိုးစဈမှာ ဖျောမပွနိုငျသော ခံစားမှုမြားစှာကို ခံစားရ သညျ။ နနျးမူ၏ နို့နှဈလုံးကို ဆုပျကိုငျ ညှဈဆုပျပှတျသပျလိုကျသညျ။ နူးအိသော အထိအတှကေို့ လကျဖြားမှတဆငျ့ ဦးနှောကျက ခံစားရ၏။ ” ဟငျး….အငျး….” မြိုးစဈ အားပါသှားကာ ဆောငျ့ခကျြသညျ ပွငျးသှားသဖွငျ့ နနျးမူမှာ လှုပျရှားလာသညျ။ မြိုးစဈ ဘာလုပျရမှနျးမသိ ဖွဈနေ၏။ လီးကို စောကျပတျထဲက ပွနျနုတျရမညျလားဟု တှေးလိုကျပွနျသညျ။ ထိုအခြိနျ နနျးမူမှာ သူမ၏ စောကျပတျထဲမှ တစုံတခုသော ခံစားမှုကို ခံစားနရေသဖွငျ့ နိုးလာခဲ့ရသညျ။ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျ၏။ ” ဟငျ….ကိုမြိုး စဈ….ရှငျ…ရှငျ…” မြိုးစဈတဈယောကျ ” ပွှတျ ” ဟူ၍ စောကျပတျထဲမှ လီးကို ဆှဲခြှတျကာ အထိတျတလနျ့ဖွဈသှားသညျ။ နနျးမူ က အခွငျးအရာကို သဘောပေါကျလိုကျကာ ပွုံးလိုကျပွီး မြိုးစဈ၏ လကျကို လှမျးဆှဲထားလိုကျသညျ။
လီးသညျ စောကျပတျထဲမှ ပွှတျကနဲ မွညျကာ ကြှတျထှကျသှားသညျ။ ” ဟို….ဟို….ကြုပျကို ခှငျ့လှတျ….” နနျးမူက ထပျမံ၍ ပွုံးကာ မြိုးစဈကို သူမ၏ ကိုယျပျေါသို့ဆှဲယူကာ ဖကျထားလိုကျသညျ။ မြိုးစဈ၏ မကျြနှာက နနျးမူ၏ နို့နှဈလုံးပျေါ အပျပွီးကသြှားသညျ။ ” ကဲ…ပါ….ကိုမြိုး စဈရယျ….ကြှနျမ ခှငျ့ပွုပါတယျ….ရှငျ အလိုရှိသလို….” မြိုးစဈတဈယောကျ ဝမျးသာလုံးဆို့သှားရသညျ။ ” တကယျ…တကယျ လား နနျးမူ….ကြုပျ…ကြုပျကို စိတျမဆိုးဘူးလား….” ” ဟငျ….အငျး….ဆိုးပါဘူး….” နနျးမူသညျ ပါးလေးဘေးသို့ မကျြနှာလှဲကာ ခဈြစဖှယျပွနျပွောလိုကျသညျ။ မြိုးစဈမှာ နနျးမူကို တငျးတငျးဖကျထား ရငျး ” ဝမျးသာလိုကျတာ….နနျးမူရယျ….ဒါဆို….ကိုယျတို့ လုပျငနျးစမယျနျော….” မြိုးစဈသညျ နနျးမူ၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ လုပျငနျးစပါလတေော့၏။ နနျးမူ၏ စောကျဖုတျလေးကို လကျဖွငျ့ ပှတျဆှဲနှိုကျ လိုကျသညျ။ စောကျရညျကွညျလေးမြားမှာ စိမျ့ဆငျးကလြာသညျ။ စောကျဖုတျအတှငျးသားနုနုမြားမှာ ရာဂသှေး ပွညျ့လြှမျး လာမှုကွောငျ့ ဖောငျးကဈ နူးညံ့လာသညျ။
လကျနှငျ့ မှတေိုငျး မှတေိုငျး စီးပိုငျပူနှေးသော အတှကေို့ ထိထိမိမိကွီး ခံစား နရေ သညျ။ အပွငျသို့စှနျးထှကျနသေော စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားမြားပငျ နူးညံ့ဖောငျးကွှလာသညျ။ တငျးတငျး အိအိနှေးနှေးရှိနျး ရှိနျးရှိလှ၏။ လီးကို အလှနျအရသာထူးစသေော စောကျခေါငျးပေါကျကလေးမြား ရှုံ့ခညျြပှခညျြ ပွဲခညျြအာခညျြဖွဈနတေော့ သညျ။ မြိုးစဈက ထထိုငျလိုကျပွီး နနျးမူကို ဒူးနှဈခြောငျးအကှာအဝေး ခြဲစလေိုကျသညျ။ ဝငျးဝါပွညျ့တငျးသော နို့ကွီးနှဈလုံး က ဖှေးဖှေး ထငျးထငျးကွီး ပျေါထှကျလာသညျ။ နို့အုံတဈခုလုံးကို ယှကျသမျးထားသော အကွောမြား တဆတျဆတျခုနျနေ သညျ။ နို့သီးခေါငျး ဘေးရှိ အညိုရောငျသမျးနသေော ကပျြပွားဝိုငျးခနျ့ပတျလညျတဝိုကျမှာ ဖောငျးစူနပွေီး ကွကျသီးဖုလေး တှေ ထနေ၏။ နို့သီးခေါငျး လေးက ခပျတောငျ့တောငျ့လေးဖွဈနသေညျ။ မြိုးစဈက နို့ကွီးနှဈလုံးကို လကျနှဈဖကျနှငျ့ အထကျ သို့ပငျ့ကာ ကုတျနှိမျ့ဆုတျခြေ ပေး၏။
နနျးမူ ဖငျဆုံသားတှေ ဘယျညာလှုပျရမျးသှားသညျ။ ဒူးနှဈခြောငျးက ဘေးသို့ကား၍ ကား၍ သှားတိုငျး စောကျမှေးအုံမဲမဲ အုပျအုပျကွီးနှငျ့ စောကျဖုတျပွဲပွဲဟဟကွီးမှာ ထငျးကနဲ ထငျးကနဲ ပျေါသှားသညျ။ မြိုးစဈ က နို့အုံထှားထှားအိအိကွီးကို စုကပျ လိုကျပွီး သူ့နှာခေါငျးကွီးဖွငျ့ ဘယျညာလူးကာ မှေ၍ မှေ၍ နမျးလိုကျသညျ။ နနျးမူ တဈ ကိုယျလုံး ကာမအဆိပျတှေ တရိပျရိပျတကျ ကာ တဟငျးဟငျး တဟတျဟတျ ဖွဈနပေါတော့သညျ။ ဒီအခြိနျရောကျမှ မလိုးဘဲ ပဈထားလိုကျလြှငျ သှေးပကျြ၍ ရူးသှားနိုငျ၏။ မြိုးစဈက နို့နှဈလုံးကို တဈလှညျ့စီ စို့ပေးလကျြကပငျ နနျးမူ၏ ပေါငျတံအောကျ သို့ လကျလြှိုသှငျးကာ သူ၏ လကျခလယျဖွငျ့ စောကျခေါငျးအတှငျးသို့ ထိုးသှငျးကာ အသှငျးအထုတျခပျသှကျသှကျကလေး လုပျပေးပွနျသညျ။
” ဗွဈ….ဗွဈ….ဗွဈ….ဗွဈ…..” ” ဖှတျ…ဖှတျ….ပွှတျ….ဗွဈ….” ” အား….အီး….အငျး….အမ လေး….အငျး….ဟငျး….အီး…..ရှီး….ကြှတျ…..ရှီး…..” ” အမေ့….ဟငျး….ဟငျး…..အား…..” ကွာလြှငျ နနျးမူတဈယောကျ ကာမ သှေးဖောကျပွနျ၍ လီးတရူးမဖွဈမညျစိုးသဖွငျ့ နှူးဆှကလိခွငျးကို ရပျနားလိုကျ သညျ။ နနျးမူခမြာ ပါးစပျကွီးဟလကျြ အသကျရှူ သံတှေ မွနျဆနျပွငျးထနျကာ မို့မောကျသော နို့အုံကွီးတှကေ နိမျ့ခြီ၊ မွငျ့ခြီ ဖွဈနပေါတော့သညျ။ မြိုးစဈက မတျတပျရပျလကျြ သူ့ ပုဆိုးကို ခြှတျခလြိုကျသညျ။ ပေါငျကွားရှိ လီးကွီးမှာ အံ့မခနျးပငျ ဒုံးကညျြကွီးတဈစငျးလို မတျထောငျနသေညျ။ မြိုးစဈက နနျးမူ၏ ခွသေလုံးကို ပခုံးပျေါသို့ မတငျလိုကျရာ နနျးမူခါးသညျ အထကျသို့မွှောကျကွှလာ၏။ ထိုမွှောကျကွှလာသော ခါးတညျ့တညျ့ အောကျတှငျ ခေါငျးအုံးတဈလုံးကို ခုပေးလိုကျသညျ။ ပွီး မှ ခွသေလုံးကို ပွနျခလြိုကျပွီး ပေါငျရငျးဘကျဆီသို့ ပို့ကပျထားလိုကျ သညျ။ ဒီတော့ နနျးမူပေါငျကွားရှိ စောကျဖုတျ ဖောငျး ဖောငျးကွီးမှာ မို့ပွူအာလာသညျ။ ဖောငျးအဈနီရဲနသေော စောကျဖုတျ အတှငျးသားမြားသညျပငျ အားကွီးလာပွီဖွဈသော ရာဂစိတျကွောငျ့ သိသာထငျရှားစှာ အဈထှကျလာပါတော့သညျ။
မြိုးစဈက နနျး မူပေါငျနှဈလုံးကွားကို ဒူးထောကျထိုငျလိုကျ သညျ။ တဈထှာလောကျ အကှာအဝေးနတောတောငျ သူ့လီးကွီးက နနျးမူ စောကျမှေး အုံအထကျရှိ ဆီးခုံမို့မို့အထကျသို့ မေး တငျနပေါသညျ။ လီးထိပျနှငျ့ အကွောစုံ အဖုတျကလေးနှငျ့ စောကျစိငုတျပွူးပွူးတို့ မကွာမ ကွာ ပှတျထိမိလရော နှဈဦးစလုံး မှာ ပူထူရှိနျးဖိနျး အီဆိမျ့သညျအထိ ကောငျးသှားကွသညျ။ တသိမျ့သိမျ့ တငွိမျ့ငွိမျ့ ကောငျးလှနျး လှသော ကာမအရသာကို ယူတတျမှရသညျ။ မြိုးစဈက ထိုကဲ့သို့ ပှတျလြှောနညျးဖွငျ့ အားရကနြေပျအောငျ ဆော့ဆှပွီးနောကျ သူ့ လီးကွီးကို လကျဖွငျ့ အသာကိုငျကာ နနျးမူ၏ ပှငျ့အာပွဲဟနသေော စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးကွီးထဲသို့ ဒဈထိပျဖြားမွုပျရုံ လကျ တဈဆဈခနျ့ တေ့ မွုပျလိုကျသညျ။ လီးသညျ တဈရဈခငျြး ဝငျရောကျသှားသညျ။ ” အငျး….ဟငျ့….အမေ့….အငျ့….အငျး….အမေ့….ဟား….ဟငျး….အငျး….အငျး….” ” ဖှတျ…ဖှတျ….ပလှတျ….ပွှတျ….ဖှတျ….ပလှတျ…ဗွဈ….” မြိုးစဈ၏ ဆောငျ့ခကျြက နနျး မူအဖို့ ခွဖြေားမှ ဆံဖြားတိုငျအောငျ ရှိရှိသမြှ ကာမအကွောတို့ကို ဖငျြးကနဲ ဖငျြးကနဲ မီး ပှငျ့စပေါသညျ။ နနျးမူ အသိစိတျတှေ လှငျ့ ထှကျသှားပွီး ကာမရယောဉျကြောသို့ မူးမစှေ့ာ မြောပါနပေါတော့သညျ။
စူခြှနျမို့ တငျးနသေော နို့အုံ ရငျအစုံမှာ နိမျ့လိုကျမွငျ့လိုကျ ဖွဈနတေော့သညျ။ ” အငျး….ဟငျ့….ဟငျး…..” ” ပွှတျ….ဘှတျ….ဘှတျ….ဖှတျ….ပွှတျ….” ” ဗွဈ….ဘှတျ…ပလှတျ… ပွှတျ….ဘတျ…..ပွှတျ…ဗွဈ…..” ” အား….ကွပျထုပျနတောပဲ နနျးမူရယျ….ကောငျးလိုကျတာ….အီး…အား….” နှဈယောကျစလုံး မှာ ပူထူရှိနျးဖိနျးပွီး ကဉျြထုံလာသညျ့ဝဒေနာနှငျ့အတူ အဆမတနျသော ကာမဆန်ဒအရသာထူးကို ခံစားလာရပွနျသညျ။ ဒီတော့ ရှိ သမြှအငျအားကို ထုတျညှဈ၍ နနျးမူကလညျး အသညျးအသနျကော့၍ ကော့၍ ခံလာသညျ။ ” ဖှပျ….ပလှတျ…..ပွှတျ….ဗွဈ….ပ လှတျ…ဘှတျ….” ” ဖှပျ….ဖှပျ….ပလှတျ….ဖှပျ….ပလှတျ…ဘှတျ….ပွှတျ….ဗွဈ….” ” အငျ့….အား….အီး….အမေ့….ကောငျးလိုကျ တာ….ကိုမြိုးစဈရယျ….ကြှနျမတော့ သမေလားမသိဘူး….ဟငျး….. အငျး….” စိတျထသလို အျောဟဈလှုပျရှားရငျး နနျးမူတဈ ယောကျ မီးကုနျယမျးကုနျ လှုပျရှားရငျး ကော့၍ ကော့၍ ပဈပဈခံပါ တော့သညျ။
အခကျြပေါငျး (၃၀)ကြျောလောကျ ဆောငျ့အပွီး တှငျ ” အီး….အ…အ….အဟငျ့….ဟငျ့….ရှီး….” ” ဗွဈ….ဗွဈ….အီး….အဟငျ့….ဟငျ့….အား….အ…..ရှီး….ကြှတျ….ကြှတျ…..” နနျးမူတဈကိုယျလုံး ပွငျးထနျစှာ တုနျလှုပျ၍ စောကျပတျအတှငျးမှ လီးကို ပွတျထှကျမတတျ ဆုပျညှဈကာ စောကျရညျမြားကို ပနျး လှတျလိုကျတော့သညျ။ မြိုးစဈသညျလညျး နနျးမူ ပွီးသှားပွီကို သိသဖွငျ့ ထိနျးထားသော သုတျကို နနျးမူ၏ စောကျခေါငျးထဲရှိ သားအိမျသို့တိုငျအောငျ ပနျးထုတျလိုကျသညျ။ သှေးသားအကွောမြိုးစုံတို့မှ ဖဈြညှဈ၍ ကာမသုတျ အားကို စှနျ့ထုတျလိုကျရ သညျ့အတှကျ အလှနျပငျ နှမျးဟိုကျခှသှေားပါတော့သညျ။ မြိုးစဈတဈယောကျ နနျးမူ၏ ရငျဘတျပျေါ မှောကျရကျကသြှားကာ တ ရှူးရှူး အသကျပွငျးပွငျးရှူနလေတေော့သညျ။ နနျးမူမှာလညျး မကျြလုံးအစုံကို မှေးစငျးကာ လကျနှဈဖကျကို ဘေးသို့ပဈခလြိုကျရ ပါတော့သညျ။ ပွီးပါပွီ ။ ။ ခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့
” အကို….နာသေးလား ဟင်….” အေးသီက သူ့အကို မျိုးစစ်ကို ဒဏ်ရာများအား ဆေးထည့်ပေးရင်း လှမ်းမေး၏။ မျိုးစစ် အံကို တင်းတင်းကြိတ်သည်။ ” သက်သာနေပါပြီ….ညီမလေးရယ်….တောက်….ဒီကောင်ငဘ တမင်ယုတ်မာတာ….ဒီကောင် ငါ့ကို ရန်ငြိုးထားပြီး တမင်ချောက်ချတယ်…ဆိုတာ…ငါသိတယ်….အေးသီ….” ” အကိုရယ်….ဒေါသမထွက်ပါနဲ့….သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူ သွားမှာပါ….” အေးသီက ဂွမ်းကို အရက်ပျံညှစ်ချပေးရင်း ပတ်တီးစည်းပေးရင်း သူ့အကိုအား နှစ်သိမ့်သည်။ မျိုးစစ်မှာ တောက်တ ခေါက်ခေါက်နှင့် ငဘနှင့် ဂျပန်တွေကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ မုန်းတီးသွားသည်။ ” နေနှင့်ဦးပေါ့ ငဘရာ….ကံကြမ္မာဟာ ဘယ်တော့မှ မျက်နှာမလိုက်ပါဘူး….” အေးသီ မျိုးစစ်ကိုကြည့်ရင်း ပင့်သက်ကို ရှူသွင်းလိုက်သည်။ နာကျင်သော သက်ပြင်းမောကို အရှည် ကြီးချသည်။ လပြည့်ညဖြစ်သည်။ အေးသီ အိပ်မပျော်နိုင်သေး သူ့ချစ်သူ ကိုထွန်းကျော် ဤနေ့ည သူ့ဆီလာလိမ့်မည်။ သူနှိုက် နေကျဖြစ် သော ကြမ်းပေါက်ကို ဖွင့်ထားလိုက်သည်။ ကိုထွန်းကျော် ရောက်လာလျှင် ထိုကြမ်းပေါက်မှ သူမကို ကုတ်နှိုးလိမ့်မည်။
ထိုခေတ်က အပျိုတို့ အိပ်ခန်း၌ အပေါက်ဖောက်ထားတတ်ကြသည်။ အပျိုတို့၏ ချစ်သူကို ဤအပေါက်မှ ညလူချေ တိတ်ချိန်တွင် စကားပြောကြသည်။ ထိုအခြင်းအရာကို အပေါက်နှိုက်သည်ဟု ခေါ်တွင်ကြသည်။ မိမိ၏ ချစ်သူမိန်းမပျိုက ကြည်ဖြူသောအခါ ထို အပေါက်မှ လက်လေးဆုပ်ကိုင်ခြင်း စကားပြောခြင်းပြုကြသည်။ ရွာရှိ ကာလသားတို့သည် ညဆိုလျှင် သူခိုးဓားပြများရန်မှ ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကာလသားများက မိမိတို့၏ချစ်သူအိမ်သို့သွားကာ အ ပေါက်နှိုက်ကာ တွေ့ဆုံစကားပြော ခွင့်ရကြသည်။ အပေါက်ဖွင့်ပေးသူ မိန်းမပျိုမှာလည်း လူကြီးများ မိဘမောင်ဖွားများ မသိ အောင် ထိုအပေါက်ကို ဖေါက်ရသည်။
အပေါက်မှာ လက်သီးဆုပ်အရွယ်ထက် ကြီးသည်။ မိန်းမပျိုတို့သည် မိမိ၏ချစ်သူနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လမ်းခွဲပြတ်စဲလို လျှင် ထိုဖွင့်ထားသော ကြမ်းပေါက်ကို သစ်သားပြားဖြင့် အသေပိတ်ပစ်လိုက်ကြ သည်။ ယောက်ျားပျိုမှာလည်း မိမိကို မိမိ၏ချစ်သူမုန်းပြီ၊ ပြတ်ပြီဟူ၍ အပေါက်ပိတ်လိုက်လျှင် သိရသည်။ ထိုအလေ့အထ သည် ယခုအခါသော် ပပျောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ အေးသီသည် သူမ၏ချစ်သူ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့ဘူးသော သူမ၏ အပျိုစင်ဘဝကိုပင် မပေးခဲ့၊ အခုသော် ယုတ် မာသောသူများကြောင့် မိမိ၏ အပျိုရည်ပျက်ရသည်။ မိမိ၏ချစ်သူ ကိုထွန်းကျော်ကို မည်သို့ဆက်ဆံပြောဆိုရမည်နည်း။
” အဟင့်….အဟင့်….” အေးသီ ငိုသည်။ မျက်ရည်များ ပါးပြင်မှတဆင့် ခေါင်းအုံးတိုင်အောင် ကျဆင်းသည်။ ကိုထွန်းကျော်သည် သူမအား လက်ထပ်ခွင့်တောင်းထားသူဖြစ်သည်။ ဤနှစ် စပါးပေါ်လျှင် သူမနှင့် လက်ထပ်ရန် ဆုံးဖြတ်တိုင်ပင်ထားကြသည်။ ကို ထွန်း ကျော်မှာ လူအ၊ လူအေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လှေတစ်စင်းဖြင့် ရိုးသားစွာ တံငါလုပ်ငန်းလုပ်ကာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အေးသီကိုလည်း တုန်နေအောင် ချစ်သည်။ အေးသီသဘော အရာရာဖြည့်ဆည်းပေး တတ်သည်။ ကိုထွန်းကျော်က အသားညိုသည်။ ကိုယ်ကာယကျန်းမာသန်စွမ်းသည်။ အမြဲလိုလို ပင်လယ်ဘက် ဖောင်မျှော နေ တတ်သူဖြစ်သဖြင့် နေဒဏ် လေဒဏ်ခံရသည့်အတွက် အသားညို၍ ကျန်းမာတောင့်တင်းသူဖြစ်သည်။
အေးသီ အတွေးတွေ ရှုတ်ထွေးနေသည်။ သူ၏အတွေးပုံရိပ်များ၌ ငဘ၏ လီးချောင်း ငဘ မိမိကို အကြံ ပက်စက်စွာ လိုးနေပုံ၊ နောက် ဂျပန်မာစတာကြီး၏ ကြီးမားသော လီးတန်ကြီး မိမိ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဝင်ထွက်နေပုံ၊ သူမ ထိုအတွေးများ ကို အာရုံမှ ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ သိပ်မကြာပါ ထိုအတွေးများသည် အသိအာရုံအတွေးထဲသို့ လိုလိုချင်ချင် ဝင်ရောက်တွေး မိပြန်သည်။ ထိုအခါ အေးသီ စိတ်တွေ ထရွလာသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ မြန်ဆန်လာသည်။ အကြောအချဉ်များ တောင့်တင်း လာသည်။ စောက် ပတ်လေးထဲမှလည်း ရွစိရွစိဖြစ်လာသည်။ သူမအလိုလို ပေါင်လေးဟကာထောင်ပြီး စောက်ဖုတ်ဖောင်း ဖောင်းလေးကို လက်ဖဝါး နှင့် ပွတ်သပ်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်း အိထွေးပုံကျနေသော နို့အုံကို ညှစ် ဆုတ်ပွတ်သပ်ကိုင်မိနေသည်။
သူမ တခဏ အသိပြန်ဝင်လာသည်။ အသိစိတ်က ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန္ဒများကို ငြင်းဆန် သည်။ သို့သော် သူမ၏ လက်များသည် နို့အုံနှင့် စောက်ဖုတ်မှ ခွာလို့မရတော့ပေ။ လက်ခလယ်ချောင်းဖြင့် စောက်စိလေးကို ပွတ်တိုက်ထိနေရခြင်း၊ နို့အုံလေးကို ပွတ်သပ် နေရခြင်းမှာ အရသာထူးများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် ထိုအရသာကို လိုချင်စွာ ခံစားနေရသည်။ သိပ်မကြာပါ သူမ၏စောက်ပတ် လေးမှ အရည်ချောဆီလေးများ ပွက်ကနဲ ထွက်ကျလာသည်။ သူမသည် မာစတာကြီး၏ လီးချောင်းကြီး မိမိ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိုးဆောင့်နေသည်ဟု တွေးနေမိသည့်အတိုင်း မိမိ၏ လက် ခလယ်လက်ချောင်းမှာလည်း စောက်ခေါင်းပေါက်လေးထဲ သို့ ဝင်ထွက်နေသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် သူမ၏ ကျောပြင်ကို အပေါက်မှ လက်နှိုက်လာသည်။
” အေးသီ….အေးသီ….” အေးသီ ထမိန်ကိုပြန်ဖုံးကာ ဖျာကိုဆွဲလိုက်သည်။ အပေါက်ဝ၌ ကိုထွန်းကျော်ကို တွေ့သည်။ ” အေး သီ….” ” ကိုထွန်းကျော်….ရှင်…ယာထဲက စောင့်နေ….ကျွန်မ နောက်ဖေးပေါက်က ဆင်းလာခဲ့မယ်….” ထိုသို့သော အေးသီ၏ စကားကြောင့် ထွန်းကျော် ပျော်သွားသည်။ ယာထဲသို့ ပြန်ပြေးသည်။ လရောင်သည် ထွန်းပ စွာ ဖြာကျနေသည်။ ထွန်းကျော် နဘူး ခြုံအကွယ်၌ အေးသီလာရာသို့ လှမ်းမျှော်နေမိသည်။ အေးသီဆီက ဤညတွင် ချစ်ခွင့် ကိုတောင်းရမည်။ အေးသီကို သူဆက်ပြီး မ နေနိုင်တော့သည့်အကြောင်းကို ပြောရမည်။ အေးသီ၏ လှပကျစ်လစ်သော ခန္ဓာ ကိုယ်လေးကို ပွေ့ဖက်ထားမည်။ ထွန်းကျော်သည် အပျော်ကြီး ပျော်နေရသည်။ အေးသီက ဤနေ့ညမှ ထူးဆန်းစွာ သူ့ကို အပြင်၌ တွေ့ရန်ချိန်းဆိုသည်။ ယခင်ညများက ကြမ်းပေါက်မှပင် လက်လေးကိုသာ ကိုင်တွယ်ခွင့်ရသည်။
ယနေ့ညတော့ အေးသီသည် မိမိ၏ရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်ရပေတော့မည်။ နဘူးခုန်တန်းလျားလေးပေါ် လရောင်သည် ဖြာကျနေသည်။ ထွန်းကျော်ကြည့်နေရာမှ အေးသီ အပြေးတစ်ပိုင်းလေး သူ့ဆီသို့ ရောက်လာသည်။ ထွန်းကျော် ဘေးနားမှာ ဝင်ထိုင်သည်။ လရောင်က အေးမြလင်းစိုနေသည်။ အေးသီက ထွန်းကျော်ကို အဓိပ္ပာယ် ပါသော မျက်လုံးအကြည့်ဖြင့် ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ကြည့်သည်။ ထွန်းကျော် ရင်ခွင်ထဲသို့ ပခုံးလေးယိုင်ကာ ထွန်းကျော်ကို ဖက်ထား ပြီး ” ကိုထွန်းကျော်….ရှင် ကျွန်မကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲဟင်….” ” မေးမှ မေးရက်လေ အေးသီရယ်….နင့်ကို ငါ့ရဲ့အသွေးအသား တွေထဲက ချစ်တာပါ….” ” ခစ်…ခစ်…တကယ်လား….” အေးသီ ရယ်သည်။ ထွန်းကျော်က ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ဖြစ်ကာ အေးသီ ကို တင်းကျပ်စွာ ပွေ့ထားသည်။ ” ကိုထွန်းကျော်….” ” ဘာလဲ….အေးသီ…” ” ကိုထွန်းကျော် ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်မယ်နော်….” ထွန်းကျော် ရင်တွေတဆတ်ဆတ် ခုန်သွားသည်။ အိပ်မက်မက်နေသူအလား ထင်မှတ်မိသည်။
” အင်း…ထိုင်….ထိုင်လေ….အေးသီ….” အေးသီက ကိုယ်လေးရွေ့ကာ ထွန်းကျော်ပေါင်ပေါ်သို့ ထိုင်ချသည်။ တင်သားအိအိကြီး များက ထွန်းကျော်ပေါင်ပေါ် အိစက်ကာ ထိနေ၏။ ထွန်းကျော်၏ လီးချောင်းကို တင်သားများက ဖိကပ်ထားသည်။ ထွန်းကျော် အေးသီကို တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထား၏။ သူ၏လီးသည်လည်း အိထွေးသော တင်သား၏ အထိအတွေ့ကြောင့် မာထန်လာ တော့သည်။ အေးသီသည် သူမ၏ တင်သားကို လီးမာမာကြီး တင်းကနဲ တင်းကနဲ တိုးထိကပ်နေသည်ကို သိလိုက်သည်။ အေးသီ မသိမသာလေး တင် ပါးသားဖြင့် လီးချောင်းကို ဖိနှဲ့ပေးလိုက်သည်။ ထွန်းကျော်၏ လက်တွေကို သူမ၏ နို့အုံပေါ်တင်ပေးလိုက် သည်။ ထွန်းကျော် သည် သူ၏လက်အား အေးသီက နို့အုံပေါ်တင်ပေးလိုက်သောအခါ စိတ်ထဲ၌ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်သွား သည်။ ယနေ့ အေးသီသည် ဘယ်လိုကြောင့် သူ့ကိုဤမျှအထိ အခွင့်အရေးပေးနေသည်ကို စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေသည်။ အမှန်တော့ အေးသီသည် ကာမဆန္ဒများ ထကြွသောင်းကျန်းနေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ထွန်းကျော်အား သနားသည်။ သူမ ချစ်သာ သူနှင့် ကာမခရီးကို သွားချင်လာမိသည်။ သို့သော် ထွန်းကျော်သည် ရိုးအလှသည်။ ဒါကြောင့်ပင် သူမကစ၍ လမ်းခင်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထွန်းကျော်က နို့အုံနှစ်လုံးကို မဆုပ်ရဲဆုပ်ရဲဖြင့် ကိုင်ဆုပ်ရင်း ” အေးသီ….အရမ်းချစ်တယ်ကွာ….အေးသီကို လက်ထပ် ယူပါ့မယ်….ဒီနေ့ ကိုလေ…အေး…အေးသီကို….” ထွန်းကျော် အသံတွေတုန်ရီနေသည်။ နို့အုံလေးကို ဖိဆုပ်ချေပွတ်နေသည်။
အေး သီက ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားသို့ လီး ချောင်းကြီးကို ဖိနှဲ့ကာ တွန်းပေးရင်း ” ကိုထွန်းကျော်….ဆန္ဒရှိသလို….လုပ်လေ….အေးသီ ခွင့်ပြုပါ တယ်….” ထိုသို့ အေးသီ၏ စကားကြားရသောအခါ ထွန်းကျော်မှာ ထီပေါက်သည်ထက် ဝမ်းသာသွားကာ ” တကယ်နော်….အေး သီ….” ” အင်းပါဆိုနေ….” ထွန်းကျော် အေးသီ၏ နို့နှစ်လုံးကို အားရပါးရ ကိုင်ဆုပ်ချေသည်။ ” အိုး….အဲဒီလို အရမ်းညှစ်ရ လား….ဒီမှာ နာတာပေါ့….” ” အာ….တောင်းပန်ပါတယ် အေးသီ….ကိုယ် စိတ်လောလို့ပါ….” အေးသီက ပြုံးလိုက်သည်။ ” အေးသီ….ဒီမှာ လှဲအိပ်နော်….” အေးသီ ခုံတန်းလျားပေါ် လှဲအိပ်လိုက်သည်။ ခြေထောက်မှာ ခပ်ဆင်းဆင်းနေသည်။ ထွန်းကျော်က အေးသီပါးလေး ကို နမ်းသည်။ ” အေးသီ….ကိုယ် လုပ်မယ်နော်….” ” အင်း….” အေးသီ မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားသည်။ လက်များက သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မိုးနေသော ထွန်းကျော်၏ ပုခုံးကို ကိုင်ထား သည်။ ပက်လက်လေးလှန်ထားသဖြင့် မို့မောက်ကော့ ထွက်နေသော ရင်သားအစုံက ကြွတက်နေသည်။ ထွန်းကျော် တံတွေး မျိုချလိုက်သည်။ အေးသီ၏ နှိပ်ကြယ်သီးကို ဖြုတ်ကာ င်္အ ကျီချွတ်လိုက်သည်။ အောက်ခံရှင်မီးအင်္ကျီလေးမှာ ကြီးမားသော နို့နှစ်လုံးကို အသားများမမြင်ရသည့်တိုင်အောင် ဖုံးကွယ် ဝှက်ထားသဖြင့် ရှင်မီးအင်္ကျီလေးကိုပါ မြန်ဆန်စွာ ချွတ်လိုက်သည်။
အေးသီသည် ယခုအချိန် မိမိ၏ချစ်သူနှင့် အလိုးခံရတော့ မည်ကို သိသဖြင့် ရင်အစုံမှာ လှိုင်းထနေသည်။ မဆွမီကပင် ကြွနေ ပြီဖြစ်သော သူမ၏ စိတ်အစဉ်သည် လှိုက်ဖိုမောနေပြီ ဖြစ်သည်။ ထွန်းကျော်က ရှူးရှူးရှားရှားဖြင့် အေးသီ၏ နို့နှစ်လုံးဖြူဖြူ လေးကို ကိုင်ဆုပ်ညှစ်၏။ တစ်ခါမှ နို့အုံဆိုသော အသားကို ကိုင်ဆုပ်ဖူးခြင်းမရှိသော ထွန်းကျော်အဖို့ နတ်ပြည်၏ စည်းစိမ်ကို ခံစားနေရသလို ထင်မိသည်။ အေးသီကလည်း အောက်မှနေ၍ ထွန်းကျော်၏ အင်္ကျီအဖြူရောင်ကို ချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ညို ထွားသော ရင်အုံအစုံကို အေးသီက လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးသည်။ ထွန်းကျော်၏ ပုဆိုးအောက်၌ လီးချောင်းမှာ တထန်ထန် ပုတ်သင်ညိုခေါင်းညိမ့်နေသလို ဖြစ်နေသည်။ မိန်းမများနှင့် အထိအတွေ့ ကို ယခုအချိန်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သဖြင့် ထွန်းကျော်မှာ အပျော်ဆုံးဖြစ်ကာ ကြည်နူးနေလေသည်။ အေးသီက ခါးလေးကော့ ကာ ထမိန်ကို အောက်သို့ လျော့ချပေး လိုက်သည်တွင် စောက်ဖုတ်ဖြူဖြူ မို့မို့လေးမှာ အထင်းသား ဝင့်ကြွားစွာထွက်ပေါ်လာ သည်။ ထွန်းကျော် ဆက်လက်၍ အချိန် မဆွဲတော့ တွေ့နေရသော စောက်ဖုတ်အကွဲလေးကို လက်ဖြင့်ပွတ်ကိုင်ကြည့်သည်။ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ချွဲတွဲတွဲ စိုစိစိဖြစ် နေသည်။ ပေါင်တံလေးများမှာ တုပ်ဖြောင့်စင်းနေသည်။
ထွန်းကျော် သူ၏ လုံချည်ကို ခေါင်းမှ ကျော်ချွတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ လီးမဲမဲကြီးမှာ ဟိုရမ်းဒီရမ်းဖြင့် မတ်ထောင်နေ သည်ကို အေးသီ တွေ့ရသည်။ အေးသီ စောက်ဖုတ်လေးမှာ လီး၏အနံ့ကြောင့် ကြုံ့ကနဲဖြစ်ကာ စောက်စိလေးမှာ ခပ်ထန် ထန်မာလာသည်။ ထွန်းကျော်သည် နွားသိုးကြိုးပြတ်သလို စောက်ပတ်အကွဲလေးထဲသို့ လီးချောင်းကို ဒလစပ်ထိုးထိုးဆောင့် တော့သည်။ လီးသည် စောက်ဖုတ်အပေါက်ထဲသို့ မဝင်ဘဲ စောက်စိကို ဖိထိုးလိုက် စောက်ဖုတ်နံရံ အကွဲနှုတ်ခမ်းကို ချော်ထိုး လိုက်ဖြစ်နေသည်။ အေးသီ က တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသော ထွန်းကျော်၏ လီးချောင်းကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဖင်ကိုကော့မြှောက် ကာ လီးကိုဇက်ချိုးနှိမ့်ပြီး စောက် ခေါင်းပေါက်လေးသို့ တေ့ပေးလိုက်သည်။ ” အဲဒါမှ အပေါက်ရှင့်….တကထဲ….မပြောချင်ဘူး….” ဟု ညူစူစူလေးနွဲ့ကာ ပြော လိုက်သည်။ ထွန်းကျော်က တဟဲဟဲရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် ဖင်ကြီးကို ချိုင့်ဝင်အောင် ကော့ဆောင့်ချလိုက်သည်။ လီးချောင်းသည် ဦးတည်ချက်ရသွားသည်နှင့် စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများနှင့် စောက်ဖုတ်နှုတ် ခမ်းကို အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ ပွတ်ထိုးသွား၏။
” အင့်….အွတ်….” ” အား….အေးသီ ရယ်….” ” အား….ကိုထွန်းကျော် အဲသလိုကြီးပဲ မဆောင့်နဲ့လေ….ကျွန်မ နာတယ်….” နာတယ်ဟု အေးသီက ရှုံ့မဲ့၍ပြောသောအခါ ထွန်းကျော်မှာ ပျာပျာသလဲဖြင့် ” ဒါဆို ဘယ်လိုလဲ….ဒီလို ဖြေးဖြေးချင်းလား….” လီး ကို ဖြေးဖြေးခြင်း သွင်းထည့်ပြီး ပြောသောအခါ အေးသီက ရှက်ရိပ်လေးဖြင့် ခေါင်းလေးညိမ့်သည်။ စောက်ဖုတ် အတွင်းသား နုနု ရဲရဲလေးများက လီးချောင်းကို ဆွဲအနုတ်တွင် ညှစ်ညှစ်ဆုပ်ပေးထားကြသဖြင့် ထွန်းကျော်မှာ ကမ္ဘာခြားတစ် ခုသို့ လွင့်မျောနေ သလို ခံစားနေရသည်။ တဖြေးဖြေး ထွန်းကျော် ဆောင့်ချက်တွေက မြန်ဆန်လာသည်။ ” ပြွတ်….ဗြစ်…ဘွတ်….” ” အင့်….အ… အီး….” အေးသီသည် တင်းပါးကို ကြွ၍ ပင့်ဆောင့်ကော့ပေး၏။ ထွန်းကျော်က လီးကို စောက်ခေါင်းထဲအထိ အဆုံးထိဝင် အောင် ပစ်ပစ်ဆောင့်၏။ ထိုသို့ ထွန်းကျော် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဆောင့်လိုးခြင်းသည်ပင် အေးသီအတွက် အင့်ကနဲ အင့်က နဲ ခံလို့ ကောင်းနေရသည်။
ခြေထောက်ကိုဆင်းကာ အကြောကို တောင့်ထားသဖြင့် စောက်ဖုတ်လေးမှာ လီးကို ညှပ်စုပ်ထား သလိုဖြစ်ကာ အေးသီမှာလည်း ပြီးချင်လာသည်။ စောက်စိကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တိုက်ပွတ်သွားလေတိုင်း ကျင်ကနဲ ဖျင်းကနဲ ဖြစ်ကာ ဖင်ကြီး ကို အစွမ်းကုန် ကော့တင်ပေးလာသည်။ ထွန်းကျော်မှာ တံတောင်ဖြင့်ထောက်ကာ လှေကြီးထိုးလိုးစဉ်နှင့်ပင် အချက် (၄၀)ခန့် မနားတမ်း ဆောင့်သွင်းလိုက်ရသောအခါ လီးချောင်းထဲမှ သုတ်ရည်ပူပူနွေးနွေးများသည် စောက်ဖုတ်လေး ထဲသို့ ပြည့်လျှံသွား အောင် ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ အေးသီ၏ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှလည်း အရည်များထွက်အံလာကာ နှစ် ယောက်လုံး ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပြီးသွားတော့သည်။ ထွန်းကျော်သည် အေးသီ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ရက်သားကျသွား လေတော့သည်။ အေး သီသည် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျော်သွားရတော့သည်။
ဂျပန်မာစတာကြီးသည် ငဘအား ချီးကျူးကာ ဝမ်းသာအားရဖြင့် ” ငဘ မင်းသိပ်တော်တယ်….ဒီနေ့ကစပြီး မင်းကို ငါရာထူးတစ်ခု ပေးမယ်….” ထိုသို့ပြောသံကြားရသောအခါ ငဘမှာ ဝမ်းသာအားရဖြင့် ” ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ မာစတာကြီးရာ….ဟိုက်…မာစ တာကြီးအတွက် ငဘက အရာရာအသင့်ပါ….” ” အေး…အေး…ဟား….ဟား….ငဘရ အေးသီရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးက လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာကွာ…မင်းတို့ မြန်မာ မတွေက စောက်ဖုတ် အရမ်းကောင်းတယ်….” ” ဟီး…ဟီး….သိပ်ကောင်းတယ်….” အမှန်တော့ ငဘသည် အေးသီကို အရင်ဦးဆုံး ပါကင်ဖွင့်လိုက်သူဖြစ်သည်။ ငဘပြီးမှ မာစတာကြီးက အေးသီကို လိုးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ငဘအရင် အေးသီကို လိုးသည်ကို မာစတာကြီးက မသိချေ။ ထန်းတောထဲတွင် ဂျပန်မာစတာကြီးနှင့် ငဘမှာ အပေးအယူမျှကာ အောင်ပွဲခံနေကြသည်။ မျိုးစစ်တစ်ယောက် ဒဏ်ရာများ ပျောက်ကင်းသောအခါ ရွာကမ်းခြေတစ်လျှောက် လှေဖြင့် ငါးဖမ်းရန် ထွက်လာခဲ့ သည်။ မျိုးစစ်လှေကို အသာလှော်ခတ်ကာ ပိုက်ချလိုက်သည်။
လမုတောကမ်းဘက်သို့ လှေကို ဦးတည်လိုက်သည်။ နောက် တစ်ညလုံး ပိုက်၌မိသော ငါးများကို ဖြုတ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် လမုတောစပ်၌ ဗျိုင်းထောင်ချောက်သုံးခု ကို ချလိုက်သည်။ ဗျိုင်း ထောက်ချောက်ဆိုသော်လည်း ရေကြက်နှင့် အခြားငှက်များလည်း မိနိုင်သည်။ နေသည် ပင်လယ်အောက် သို့ တဖြေးဖြေး ငုတ်လျှိုးသွားသည်။ လရောင်သည် ထင်းထင်းလေး ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကိုင်းတောများကို လေက တသုန်သုန်ဝှေ့ တိုက် သည်။ လေနှင့်အတူ သီချင်းသံကို နားထောင်မိသည်။ ” မေ…..မှာ…အားငယ်ချစ်အားပို….ညူစူလို့ စိမ်း…..စိမ်းရက်တဲ့ မောင်ရယ်…..ယိမ်းနွဲ့ကာ တပင်ကိုကူး…..မောင်မဲ့ သော သစ္စာဆူး…..ဆူး…..မေ့ရင်ကို လာလာ ဆူး….ဆူး….” သာယာသော သီချင်းသံကို လွင့်ပျံ့စွာကြားရသောအခါ မျိုးစစ် အံ့သြသွားမိသည်။
ဤလမုတောထဲ၌ တွေ့ရ၊ ကြားရ ခဲသော အသံဖြစ်သည်။ အသံလာရာသို့ ကိုင်းတောများကြားမှ မျိုးစစ် ခြေသံလုံစွာ လှမ်းလာခဲ့သည်။ တဲအိမ်လေးမှ မီးခွက် မီးအရောင်ကို တွေ့ရသည်။ တဲ အိမ်လေးနားသို့ တိုးလျှောက်သွားသည်။ ” ဝုတ်….ဝုတ်…..ဝုတ်…..” ” အား…..” ” ဟဲ့….ရန်လုံ….ဟဲ့ ဟဲ့ ရန်လုံ မကိုက်ရ ဘူး….အို….အို့ အို့….လာလာ ရန်လုံ….” ရန်လုံဆိုသော ခွေးကြီးမှာ ဘယ်က ဘယ်လိုရောက်လာမှန်းမသိဘဲ တဲအနီးသို့ကပ်လာ သော မျိုးစစ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင် နိုင်ကြီး ကိုက်လိုက်သည်။ မထင်မှတ်ပဲ ဝင်လာသော ခွေးကြီးကို မျိုးစစ်ပြန်၍ မခုခံနိုင်တော့ မျိုးစစ် ခြေသလုံးမှ ရန်လုံ၏ အစွယ်ရာကြောင့် သွေးများစိမ့်ယိုကျလာသည်။
” ရှင်….ဘာဖြစ်သွားလဲ….ဟင်….ဟင်….သွေးတွေ အများကြီးပါလားဟင်….” အသံရှင်မိန်းမပျိုသည် မျိုးစစ်အနီးသို့ရောက်လာပြီး မျိုးစစ်ကိုမေးသည်။ မျိုးစစ် ခေါင်းမော့၍ မိန်းမပျိုကို ကြည့်မိ သည်။ မိန်းမပျိုမှာ လှပသည်။ ညိုသောညက်သော အသားအရေရှိပြီး ရင်အစုံတင်ပါး ခါးတို့နှင့် အရပ်အမောင်းမှာ အချိုးအ စားကျနစွာ သူ့နေရာနှင့်သူ တင့်တယ်လှပလှသည်။ ” ကျုပ်က တံငါသည်ပါ….ဒီတောမှာ ဗျိုင်းထောင်မလို့ မင်းက ဘယ်ကဘယ်လို အရင်က ဒီမှာမတွေ့ဖူးပါဘူး…..” မိန်းမပျိုသည် မျိုး စစ်ကို သေချာကြည့်ကာ ” အရင်က ဒီမှာမရှိဘူး…..ကျွန်မမှာ အခုအလုပ်ကိစ္စနည်းနည်းရှိလို့ ဒီမှာတစ်ပတ်တိတိနေရမှာ….” ” ဒါ ဆို….မင်း….သွေးရဲ့အကြောင်းကို သိလား….” ” ရှင်….အော်….သွေးရဲ့အကြောင်းကို သိပါတယ်….” ” ဒါဆို မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကြောင်း သိလား….” ” သိပ်သိတာပေါ့….မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သွေးရဲကြတယ်….” ထိုသို့ မိန်းမပျို၏ ပြန်ပြောမှုကြောင့် မျိုး စစ်မှာ အံ့သြစွာ ” ဒါဆို….မင်းက သွေးသောက်ရဲဘော်တစ်ယောက်ပေါ့….ဟုတ်လား…..” အမှန် သွေးအကြောင်းကို စကားဝှက် ဖြင့် မျိုးစစ်က မေးခြင်းဖြစ်သည်။ မိန်းမပျိုသည် သွေးသောက်ရဲဘော် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။
” ဟုတ်တယ်….သခင်ဘညွန့်တို့ ဒီမှာ လာလိမ့်မယ်….ကျွန်မ တစ်ပတ်လောက် ကြိုစောင့်နေတာ….ကဲလာပါ….ရှင့် ဒဏ်ရာ သွေးအရမ်းထွက်နေတယ်….ကျွန်မ ဆေး ထည့်ပေးမယ်….လာလေ….တဲထဲကို….အို…မေ့လို့ ကျွန်မတွဲခေါ်ပေးမယ် …..” မျိုးစစ်ကို တွဲ၍ မိန်းမပျိုက တဲဆီသို့ခေါ်လာသည်။ မျိုးစစ်၏ ခြေသလုံးမှ ဒဏ်ရာကို ဆေးထည့်ပေးရင်း ” ရှင်ကရော ဘယ်သခင်လက်အောက်ကလဲ…..နာမည်ကရော ဘယ်လိုခေါ် သလဲ…..” ” ကျုပ်နာမည် မျိုးစစ် ပါ….သခင်လှဆောင်ရဲ့ အထူးပျောက်ကျား စနည်းနာအဖွဲ့ကပါ….” ” အော်….မျိုးစစ်တဲ့ လား….တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်…..” ” ကျွန်မနာမည်က နန်းမူတဲ့….ကျွန်မတို့က စော်ဘွားမျိုးရိုး….” ” အော်….စော်ဘွားမျိုးရဲ့ နန်းမူ ကိုး….” သူမ မျိုးစစ်ကို သေချာစိုက်ကြည့်သည်။ မျိုးစစ်နှင့် မျက်လုံးခြင်းဆုံသည်။ ” ရှင် ဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲ….” ” ကျုပ် ငါးဖမ်းဖို့ လာတာမဟုတ်ဘူး….သခင်လှဆောင်က ဒီမှာခင်ဗျားနဲ့အတူ သူ့ကိုစောင့်နေဖို့ လွှတ်လိုက်တာ…..” ” အို…..ဒါဆို ကောင်းတာပေါ့….ကျွန်မလည်း ဒီတဲထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ရှင်ပါရှိတော့ အဖော်ရတာပေါ့….” နန်းမူက အိမ်နောက်ဘက်သို့ဝင်ကာ ရေနွေးပန်းကန်ကို ချပေးသည်။
ထန်းလျက်များကို ပန်းကန်ပြားဖြင့် ထည့်လာ ၏။ ” ရှင် ရေနွေးနဲ့ ထန်းလျက်လေး စားလိုက် ဦးလေ….” ” ကျေးဇူးပဲ နန်းမူ….” ” ဒါနဲ့…အိပ်ယာက တစ်ခုထဲရှိတယ်….” ” ရပါတယ်….ကျုပ်ဖြစ်သလို အိပ်ပါ့မယ်….ကျုပ် ပိုက်ထောင်ထားသေးတယ်…..အဲ့ဒါတစ်ညလုံး အိပ်လို့မရဘူး…. နန်းမူ အိပ်ပါ….ကျုပ်စောင့်ပေးမယ်….” နန်းမူက ပြုံးသည်။ ပါးချိုင့်လေး ပြားခွက်ဝင်သွားသည်။ ရင်သားအစုံမှာ ရှေ့သို့ပြူးကော့မောက်ထွက်နေသည်။ ကျုံ့ ထိုင်ထားသောကြောင့် ပေါင်တန် ဆင်းဆင်းနှင့် တင်သားများကို တင်းရင်းစွာ တွေ့ရသည်။ နန်းမူက ထသွားသည်။ ” နန်းမူ မအိပ်ချင်ဘူး….ဒီလိုလုပ် ရှင်နဲ့ လိုက်ခဲ့ မယ်လေ….” မျိုးစစ်ကို ရွှန်းဝေစွာကြည့်၍ ပြော၏။ မျိုးစစ် ရင်တွေခုန်သွားရသည်။ ” ကောင်းပြီလေ….လိုက်ခဲ့ပေါ့….” မျိုးစစ် လှေကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ နန်းမူက လှေဦး၌ ထိုင်၏။ ပိုက်၌ မိနေသော ငါးများကို လိုက်၍ဖြုတ်သည်။ အပြန်တွင် လှေဝမ်း ထဲ၌ ငါးတော်တော်များများ ရလိုက်သည်။ မျိုးစစ်က လွယ်အိတ်ထဲမှ ချက်အရက်ပုလင်းကို မော့သောက်သည်။
” ရှင်….အရက်သောက်တတ်တယ်နော်….” ” အင်း….ကျုပ်က ကျန်းမာရေးအတွက်လောက်ပါ….” လှေဝမ်းထဲ၌ ငါးများကို ပလိုင်းကြီးထဲတွင်ထည့်ကာ မျိုးစစ်တို့ ယာတဲလေးဆီသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ယာတဲ၌ မီးအိမ်အ လင်းရောင်သည် လင်းတလက်လက် လှပနေသလို နန်းမူမှာ တမျိုးတဖုံလှပနေသည်။ ” ရှင်….ငါးကင်စားမလား….ကျွန်မ ကင်ပေးမယ်လေ….အရက်နဲ့ မြည်းပေါ့….” ” ဟာ….ဟုတ်တာပေါ့….တကယ်ပဲ….ကောင်းတယ်…..” နန်းမူက မျိုးစစ်ကို မျက်စောင်းလေးလှပစွာ ထိုးကာ ပလိုင်းထဲမှ ကက် ကတစ်ငါးတစ်ကောင်ကိုယူ၍ မီးဖိုဖို၍ ကင် လေတော့သည်။ ခဏကြာသောအခါ မွေးပျံ့သော ငါးကင်အနံ့ကို မျိုးစစ် ရှူရှိုက် မိသည်။ နန်းမူက ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်နှင့် ဖန်ခွက်များကို ယူလာပေးသည်။ ” ကဲ….စားရင်း သောက်ပေတော့….” ” ကျေးဇူးပဲ နန်းမူ….” နန်းမူကို စိုက်ကြည့်ရင်း မျိုးစစ် ပြောလိုက်သည်။ နန်းမူက ပြုံးကာ သူ့ကို စူးစူးရဲရဲ ပြန်စိုက်ကြည့်သည်။
ငါးကင်ကို ဖဲ့ စားရင်း ” ရှင် မြည်းကြည့်လေ….ကောင်းသွားမှာ….” မျိုးစစ်က ဖန်ခွက်ထဲ ချက်အရက်ကို ထည့်ပြီး မော့သောက်ကာ ငါးကင်ကို တဖဲ့ကိုက်ဝါးရင်း ” အား….ချိုလိုက်တာ….ကောင်းတယ်….နန်းမူ….အရမ်းကောင်းတာပဲ….” ” ကဲပါ…သိပ်မြှောက်မနေနဲ့ ဦး….နောက်ထပ် သွားကင်လိုက်ဦးမယ်….” ထိုသို့ ချစ်စဖွယ်ပြန်ပြောကာ ထသွားသော နန်းမူကို ရင်တမမဖြင့် မျိုးစစ်ကြည့်ကာ သက်ပျင်းချလိုက်သည်။ တင်သားများ အနိမ့်အမြင့် တုန်ခါသွားသော နန်းမူ၏ နောက်ပိုင်းအလှမှာ မျိုးစစ်အတွက် ပြစ်မှားချင်စရာ ဖြစ်နေသည်။ မျိုးစစ် စိတ်ကို တခြားလွှဲပစ်လိုက်သည်။ ထကြွလာသော စိတ်ကို ချိုးနှိမ်လိုက်ပြီး အရက်ကို ဖိသောက်သည်။ ငါးကင်ကို စားကောင်း ကောင်းနှင့် စားလိုက်ရာ ခေါင်းပိုင်းနှင့် အရိုးသာ ကျန်တော့သည့်အချိန်တွင် နန်းမူက နောက်ထပ် ငါးကင် တစ်ကောင်ကို ကင်ပေးပြန်သည်။ မျိုးစစ်သည် ချက်အရက်အရှိန်ကြောင့် ရီဝေလာသည်။ နန်းမူကို အကြာကြီး စူးရဲစွာ စိုက်ကြည့်သည်။ နန်းမူက ရဲတင်းစွာ ပြန်ကြည့်၏။ ” နန်းမူလည်း စားလေ….” ” အင်း….စားမှာပေါ့….” ဟူ၍ ပြောကာ ငါးကင် ကို ဖဲ့စားသည်။ ပြီးနောက် အရက်ပုလင်းကို ကိုင်ကာ အရက်ငှဲ့ပေးသည်။
မျိုးစစ်က ရေ တောင်မရောဘဲ နန်းမူ ငှဲ့ပေးသောအရက် ကို မော့သောက်လိုက်သည်။ နန်းမူက အဆင်သင့် ငါးကင်ကို ဖဲ့ပေး၏။ မျိုးစစ်တစ် ယောက် စည်းစိမ်တွေ့နေရသည်။ ထို့အပြင် ပြင်းရှသော ချက်အရက်အရှိန်ကြောင့် အတော်ကို မူးနေပြီဖြစ်သည်။ ” ကျုပ်….မူးလာပြီ….နန်းမူ….ကျုပ် အရမ်းများသွားပြီ….” ” ဟင်….ဟုတ်လား….ဒါဆိုလဲ ရှင် အိပ်နေလိုက်လေ….” မျိုးစစ် တုံးလုံးလှဲကာ အိပ်ပျော်သွားတော့သည်။ နန်းမူက မျိုးစစ်၏ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆစ်ကို သေချာစွာ ထိုင်ကြည့် နေသည်။ ထိုအချိန်တွင် မျိုးစစ်၏ ပေါင်ကြားမှ လီးချောင်းကြီးမှာ ထန်ကနဲ ထောင်မတ်လာသည်ကို နန်းမူ တွေ့လိုက်သည်။ နန်းမူ မျက်လုံးလေး ပြူးကျယ်သွားရသည်။ ” ဟွန်း….အိပ်နေတာတောင် ဟိုဟာ က ထောင်နေသေးတယ်….” နန်းမူ ထိုသို့ပြောကာ ပုဆိုးအောက်၌ ထောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို မမှိတ်မသုန် စိုက်ကြည့်၏။ ကြည့်နေရင်း စိတ်ထဲ၌ မရိုးမရွဖြစ်လာကာ တငေါက်ငေါက်ထောင်နေသော လီးကိုကိုင်ကြည့်ချင်လာသည်။
” ကိုမျိုးစစ်….ကို မျိုးစစ်….” ဟူ၍ မျိုးစစ်ကို သွေးတိုးစမ်းကာ ခေါ်ကြည့်သည်။ မျိုးစစ်က တုတ်တုတ်မှမလှုပ် မိန်းမတို့မည်သည် ဆိတ်ကွယ်ရာ လူသူရှင်းသော တိတ်ဆိတ်သောနေရာအချိန်၌ စိတ်သည် ဖောက်ပြန်တတ်ကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။ နန်းမူ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားရုန်းကြွလာသည်။ အာခေါင်များ ခြောက်သွေ့ကာ တံတွေးကို တစ်ချက်မြိုချမိသည်။ နန်းမူ အတွေးကို စဉ်းစားသုံးသပ် မိ၏။ မိမိသည် မျိုးစစ် အိပ်ပျော်နေချိန်အတွင်း တက်၍ လုပ်ခဲ့သော် မနိုးရင်ကောင်း၏။ နိုးခဲ့ပါက မိန်းမတန်မဲ့ အရှက်ကွဲရပေ လိမ့်မည်။ သူမခေါင်းထဲသို့ အကြံတစ်ခု ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ မျိုးစစ်အား အတင်းလက်ဆွဲကာ နှိုးမည်။ နိုးလာသောအခါ အိပ်ဆေးထည့်ထားသော အရက်ကို တိုက်မည်။ ထိုအခါကျမှ မိမိအနေဖြင့် စိတ်ချလက်ချ ဆန္ဒကို ဖြေဖျောက်နိုင်လိမ့်မည်။ နန်းမူ သူမ၏ အကြံအတိုင်းပြုလုပ်ကာ မျိုးစစ်ကို လှုပ်နှိုးသည်။
” ကိုမျိုးစစ်….ကိုမျိုးစစ်….ကိုမျိုးစစ်….” ” ဟင်…ဟင်း….ဘာ လဲ…..ဟင်….” ” ရှင်….မူးနေတာလား….အိပ်ပျော်သွားတာလား….” အရက်မူးသူတိုင်း မူးသည်ဟု မည်သူမျှမပြော ထို့အတူ ခိုး သူတိုင်းလည်း ခိုးသည်ဟု ဘယ်သောအခါမျှ မပြောတတ် သော မူအတိုင်း မျိုးစစ်သည် ” ဟင်….အင်း….ဟာ….ဘယ့်နှယ်….ကျုပ် မူးရမှာလဲ….ခဏအိပ်ပျော်သွားတာပါ….” နန်းမူသည် အိပ်ဆေးထည့်ထားသော အရက် ခွက်ကိုယူ၍ မျိုးစစ်ထံ ကမ်းပေးလိုက်သည်။ ” ရော့….ဒါအကုန်သောက်လိုက်လေ….ဘာဖြစ်လို့ ချန်ထားတာလဲ….” ” အင်း….ပေး….” မျိုးစစ် တကွတ်ကွတ် အရက်ကို မော့ချသည်။ နန်းမူက ငါးကင်တဖဲ့ကို လှမ်းပေး၏။ မျိုးစစ်က ငါးကင်ကို မျက်စိ မပွင့် တပွင့်ဖြင်း ဝါးရင်း ခေါင်းအုံးပေါ်သို့ လှဲလိုက်သည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ တခူးခူးဖြင့် အိပ်ပျော်သွားပေတော့သည်။ နန်း မူသည် စိတ်ချလောက်သည့်အနေအထားတွင် သူ၏လုပ်ငန်းကို စပေတော့သည်။
ပထမဆုံး မျိုးစစ်၏ လုံချည်ကို ခါးပေါ် အထိ လှန်တင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ကျစ်လှစ်ပြီး ကြွက်သားများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော မျိုးစစ်၏ ပေါင်တံညိုညိုကို တွေ့ရသည်။ ဆီးစပ်အမွှေးများမှာ ချုံပုတ်ငယ်တစ်ခုလို ရှုပ်ထွေးသန်မာနေသည်။ ပျော့ခွေနေသော လီးချောင်းကြီးမှာ ဇက် ကျိုးကျနေသော မြွေ ကြီးတစ်ကောင်နှယ်ရှိ၏။ နန်းမူ လီးပျော့ကို လက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်ကိုင်ကြည့်၏။ ယောက်ျားကြီးတစ် ယောက်၏ လီးကို ပထမဦးဆုံး ကိုင်ရသည့်အချိန်မှာ နန်းမူ ရင်ခုန်နေရသည်။ တဖြည်းဖြည်း မျိုးစစ်၏ လီးမှာ နန်းမူ၏ လက် ထဲတွင် ထန်မာလာပြီဖြစ်သည်။ နန်း မူ အသည်းယားလာသည်။ လီးကြီးမှာ နျူကလီးယားထိပ်ဖူးကြီးနှယ် တင်းပြောင်လာ သည်။ ယောက်ျားတို့ သဘာဝမှာ အိပ်နေ သော်လည်း လီးမှာ တောင်နေတတ်ကြသည်။
နန်းမူ မျိုးစစ်ခါးပေါ်သို့ ကားယားခွ လိုက်သည်။ စောက်ပတ်လေးမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ဖြဲထားသဖြင့် နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လွှာမှာ ပြဲဟဟလေး လန်တက်နေသည်။ နန်းမူ တံတွေးတစ်ချက် မြိုချလိုက် သည်။ စောက်ပတ်ထဲမှ ယားကျိကျိဖြစ်လာသည်။ မျိုးစစ်၏ လီးကို ဖင်ဆုံကြွ၍ လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ စောက်ခေါင်းပေါက်ဆီသို့ တေ့သွင်းလိုက်သည်။ လီးဒစ်ထိပ်ဖူးသည် တင်ပါးကို တစ်ရစ်ရစ် ဖိချနှဲ့သွင်းလိုက် ခြင်းကြောင့် ဗြစ်ဆိုသည့် မြည်သံနှင့်အတူ တ ဝတ်တိတိ စိုက်ဝင်သွားသည်။
” အ….ကြီးလိုက်တဲ့ လီး….” ဤသို့ နန်းမူသည် ညည်းတွားလိုက်ပြီး ရှေ့သို့လက်ထောက်ကာ ကိုယ်ကိုကိုင်း၍ ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖင် ကို နှိမ့်ချလိုက် ပြန်ဆွဲတင်လိုက် လုပ်၏။ စောက်ပတ်လေးမှာ လီး၏ ဝင်ထွက်မှုကြောင့် ပြဲအာသွား၏။ လီးကိုဖိ၍ သွင်းလိုက်ချိန် စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာမှာ တံခါးလေးစိသွားသလို စုကပ်သွားကြသည်။ လီးတန်က စောက်ခေါင်းပေါက် အပေါ်ထိပ်၌ မျက်ရည်စက် လေးနှယ်တင်တွဲကပ်ကာရှိနေသော စောက်စိလေးကို ထိပွတ်ထိုးသွားသည်။ နန်းမူတစ်ယောက် အကြောအချဉ်များ တ ဆတ်ဆတ် လူးလာရသည်။ လီး၏ အထိအတွေ့သည် ဤမျှလောက် မကြုံစဖူးသော ခံစားမှုအရသာဖြစ်နေ၏။ စိတ်အာရုံ သည် လွတ်ထွက်သွားသည်။
သူမသည် ကိုယ်လေးကိုင်းကာ တင်ပဆုံအား နောက်သို့ပစ်ဆောင့်ချလိုက်ရင်း စောက်ပတ်ထဲ မှ ချွဲကျိ သော အရည်ကြည်လေးများ ထွက်ကျလာသည်။ ထိုသောအခါမှ ကြမ်းတမ်းသော ခံစားမှုမှာ တဖြည်းဖြည်း နူးညံ့သိမ် မွေ့လာ တော့သည်။ ” ဟင်း….အင်း….” ” ပြွတ်…ဗြစ်…ပလွတ်…ဘွတ်…ပြွတ်….ပလွတ်…ဘွတ်….ဗြစ်….ပြွတ်….” ” အား….ဟင်း….” နန်းမူသည် ဆောင့်ချမှုမှာ တဖြည်းဖြည်း မြန်ဆန်လာသည်။ တင်ပဆုံကို နှဲ့လိုက် ဆောင့်ချလိုက်ဖြင့် နန်းမူမှာ လီးဝင် လီးထွက်သွား တိုင်း တဟင်းဟင်းဖြစ်ကာ အသက်ရှုနှုန်းများ မြန်ဆန်လာသည်။ စောက်ပတ်လေးမှာ ထူးခြားဆန်းပြား သော အရသာထူးတစ်ရပ် မှာ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ တင်ပါးဆုံကားကားကြီးမှာ ဖိဆောင့်ချလိုက်တိုင်း အိတုန်ခါသွား ကြသည်။ မျိုးစစ်မှာ ဆန့်ဆန့် ကြီးပင် တခူးခူးဖြင့် အိပ်ပျော်နေရှာသည်။ နန်းမူသည် ကိုယ်ကိုကိုင်း၍ မျိုးစစ်၏ ရင်ဘတ်ပေါ် သို့ ပါးအပ်လိုက်သည်။
သူမ၏ နို့နှစ် လုံးသည် ဖိကပ်ပြားသွားသည်။ နန်းမူသည် ကားပြဲနေသော ခြေနှစ်ချောင်းကိုစု၍ ကိုယ် ခြင်းထပ် ဖိကာ ဖင်ကိုကော့၍ ဆောင့်ချ၏။ ” ဘွတ်…ပလွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်…ဘွတ်….ပြွတ်….ဘတ်….ဘတ်….” ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်သည် နန်းမူ၏ သားအိမ်ခေါင်းကို ထိသွားသည်။ နန်းမူ ကျင်ကနဲ အောင့်သက်သက်ဖြစ် သွားသည်။ ထိုအောင့်သက်သက် အရသာပင် ထူးခြားသောအရသာများ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေပြန်၍ လီးသည် စောက်ခေါင်းထဲ သို့အဆုံးအထိ ဝင်စေရန် ဆောင့်ဆောင့်ချလိုက် သည်။ ယခုကဲ့သို့ စိတ်ရှိတိုင်း လိုးဆောင့်ချနေရခြင်းတွင် နန်းမူသည် ထူးခြားသော အာရုံအထိအတွေ့များဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘလောက်ရင်ဖုံးအင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ နို့ လေးနှစ်လုံးမှာ လုံးဝန်းကာ ဘွားကနဲ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ပုခုံးလေး ကို အနည်းငယ်စောင်းရင်း သူမဘာသာ နို့တစ်လုံးကို ညှစ်ဆုပ်ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ နို့အုံကို အရင်းမှပင်အဖျားအထိ ပင့်ဆုပ်ကိုင် ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးအား စောက်ပတ်ထဲသို့လီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း မျိုးစစ်၏ ရင်ဘတ်ဖြင့် ပွတ်သပ်ထိနေစေသည်။
နို့သီး ခေါင်းမှ အကြောဆုံသည် ခံစားမှုအရသာတစ် ရပ်ကို ပေးပြန်သည်။ နန်းမူသည် ဖင်ဆုံမှ အကြောများ ချိုင့်သွားအောင် စောက် ပတ်ဖြင့် လီးကြီးကို ညှစ်ပွတ်ဆွဲကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ဆောင့်ချက်မှာ မြန်ဆန်လာရာမှ တဖြေးဖြေးနှေးလာကာ ခြေထောက် နှစ်ချောင်းအား ဆန့်ကာ မျိုးစစ်၏ လီးမွှေးအုံထူကြီးနှင့် သူမ၏ အမွှေးများဖိကပ်ပွတ်သံ၊ လီးဝင်ထွက်သံသည် တဗြစ်ဗြစ် တဗြင်း ဗြင်း မြည်နေသည်။ နန်းမူသည် စောက်ပတ်အတွင်း မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်တစ်မျိုးထွက်ပေါ်လာသလို ဖင်ကို အောက်ဆုံးအထိ နှိမ့်ချပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်လိုးသွင်းလိုက်သောအခါ စိတ်အစဉ်သည် တလှပ်လှပ်ဖြစ်သွားကာ စောက်ပတ်ထဲမှ ဖော်မပြနိုင်သော ခံစားမှု ပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်လာပြီး သူမသည် အရည်များကို စောက်ပတ်ထဲမှ ညှစ်ထုတ်လိုက်တော့သည်။ နန်းမူ ပြီးသွားရသည်။ နန်းမူ သည် မလှုပ်ချင်တော့။ ကာမ၏ အရသာကို တစိမ့်စိမ့်ကြီး ခံစားလိုက်ရသည်။ မျိုးစစ်၏ ပါးပြင်ကို နမ်းရှုံ့၍မွှေးလိုက်သည်။ ” ကို မျိုးစစ်ရယ်….ရှင်နဲ့သာဆိုရင်….ကျွန်မ စိတ်တူကိုယ်တူ ချစ်ချင်ပါသေးတယ်….” ဟူ၍ ပြောလိုက်တော့သည်။
မျိုးစစ်သည် မနက် (၃)နာရီတွင် နိုးလာခဲ့သည်။ သူနိုးလာတော့ အပြင်းဆန့်သည်။ အပေါ့သွားချင်လာသဖြင့် အိမ် နောက်ဖေးဘက်သို့ ခြေသံဖွဖွ ဖြင့် သွားသည်။ ဓနိသာကာရံထားသော အခန်း၌ နန်းမူသည် အိပ်မောကျလျက်ရှိသည်။ မျိုးစစ်သည် နန်းမူကိုမြင်တော့ ကြက်သီး များပင် ထသွားမိသည်။ နန်းမူသည် ထဘီကိုရင်လျားထားပြီး အိပ်ပျော်နေသည်။ သို့သော် ထဘီမှာ ပြေလျော့နေကာ ရင်သားအစုံ မှာ တချို့တဝက် လှစ်ပေါ်နေသည်။ ပက်လက်လေး အိပ်ပျော်နေသဖြင့် ထဘီအောက်၌ အခုအခံမရှိသော အသားစိုင်များမှာ အထင်းသားပေါ်လွင်နေသည်။ ဗိုက်သားချပ်ချပ်လေးမှာ ပူလိုက်ဖောင်း လိုက်ဖြစ်နေသည်။ စောက်ပတ်နေရာ၌ V ပုံသဏ္ဍာန် ရေးရေးမြင်ရသည်။ ထိုနေရာ၌ ထဘီသည် အကွက်ကွက်ကာ စွန်း ထင်းနေသည်။ တောင့်တင်းလှသော ပေါင်တံစင်းစင်းလေးမှာ မျိုးစစ်၏ ရမ္မက်မီးကို ဟုန်းကနဲ “ထ” တောက်စေသည်။ မျိုးစစ် သူ၏လီးကို လက်ဖြင့်ညှစ်ဆုပ်ထားမိသည်။
လီးသည် ဦးနှောက်မှ စေ့ဆော်မှုကြောင့် လီးချောင်းအတွင်း သွေးများ အဆက်မပြတ်တိုးကာ လီးသည် တောင်မာလာသည်။ မျိုးစစ်သည် စိတ်ကို တင်း လိုက်သည်။ အိမ်နောက်ဖေး၌ သေးထိုင် ပေါက်လိုက်သည်။ လီးသည် ထူးခြားစွာ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေသည်ကို သူ ကိုင်တွယ် မိသည်။ ထို့ပြင် ဂွေးဥနှင့် ပေါင်ခြံများတွင် လည်း စေးကပ်ကပ်အရည်များပေကျံနေသည်။ မျိုးစစ် မျက်မှောင်ကြုတ်ကာ စဉ်းစား၏။ ဤအရည်များ မိမိဆီက ထွက်သည် လား၊ ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်သေး။ သူလက်နှင့် သုတ်ယူကာ နမ်းကြည့်သည်။ ညှီစို့စို့ အနံ့ကိုရသည်။ မျိုးစစ် ကြောင်သွားရသည်။ တခဏ မှင်သက်သွားသည်။ မိမိအိပ်ပျော်နေချိန် သုတ်လွှတ်ခြင်း၊ သုတ်ထွက်ခြင်း မ ဖြစ်နိုင်ပေ။ နန်းမူ….နန်းမူကများ မျိုးစစ် ရေရာတိကျစွာ ဘာတစ်ခုမျှ စဉ်းစားလို့မရပေ။ တဲပေါ်သို့ ပြန်တက်လိုက်သည်။ နန်းမူက နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နေဆဲ၊ မျိုးစစ် နန်းမူ၏ ထဘီလေးကို ပေါင်အရင်းအထိ လှန်တင်လိုက်သည်။ စောက်ပတ်အကွဲလေးကို မြင်ရ သည်။ ထိုအကွဲလေးမှ အရည် တချို့သည် ဖင်အကွဲလေးအတိုင်း စိမ့်ကျနေသည်။
မျိုးစစ် အခြေအနေအဖြစ်မှန်ကို သဘောပေါက် လိုက်သည်။ ထို့အတူ နန်းမူမျက်နှာလေးအား အံ့သြစွာကြည့်မိသည်။ နန်းမူသည် မိမိ၏ အရက်ခွက်၌ အိပ်ဆေးကို ကြိမ်းသေထည့် တိုက်မည်။ ထို့ နောက် သူမ မိမိအိပ်ဆေးကြောင့် လူမှန်းသူမှန်းမသိ အိပ်ပျော်နေချိန်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားကာ တက်လုပ်ခဲ့ပေမည်။ မျိုး စစ် ပြုံးမိ သည်။ နန်းမူ၏ လှစ်ပေါ်နေသော နို့အုံကို မဖုံးတဖုံးလေး ဖုံးထားသော ထဘီစကို ဗိုက်သားအထိ ဆွဲချလိုက်သည်။ ထဘီ လေးသည် အောက်စရော အပေါ်စပါ ဗိုက်သားပေါ်၌ စုတင်သွားကြသည်။ နို့အုံလေးများသည် နေမထိသဖြင့် ဖြူဥနုရွနေ သည်။ ပက်လက်လေး အိပ်နေသဖြင့် တွဲပုံအိနေသည်။ မျိုးစစ် ဆက်လက်၍ စိတ်မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ သူသည် သွေးသားနှင့် တည်ဆောက်ထားသော ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့် နန်းမူ၏ ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ဖြဲခွဲလိုက်သည်။ ထိုပေါင်ကို ကွေး၍ ထောင်စေလိုက်ပြီး စောက်ပတ်အပေါက်လေးထံသို့ သူ၏ လီးဒစ်ကို ဖိသွင်းချလိုက်သည်။ လီးသည် တစ်ချက်တစ်သွားပြီးမှ နောက်တစ်ချက် ဖိသွင်းလိုက်ကာမှ လီးချောင်းတစ်ချောင်းလုံး စောက်ပတ်ထဲသို့ ပြည့်သိပ်ကျပ်တည်းစွာ အဆုံးအထိ ဝင် ရောက် သွားပေသည်။
နန်းမူ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို ကားကားလေး ဆန့်၍ပြန်ထားလိုက်သည်။ သုံးလေးချက် ဖိဆောင့်သွင်း လိုက်သည်။ လီး တစ်ချောင်းလုံး စောက်ပတ်အသားနုနုလေးကို ဖိပွတ် တိုးဝင်သွားလေတိုင်း မျိုးစစ်မှာ ဖော်မပြနိုင်သော ခံစားမှုများစွာကို ခံစားရ သည်။ နန်းမူ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင် ညှစ်ဆုပ်ပွတ်သပ်လိုက်သည်။ နူးအိသော အထိအတွေ့ကို လက်ဖျားမှတဆင့် ဦးနှောက်က ခံစားရ၏။ ” ဟင်း….အင်း….” မျိုးစစ် အားပါသွားကာ ဆောင့်ချက်သည် ပြင်းသွားသဖြင့် နန်းမူမှာ လှုပ်ရှားလာသည်။ မျိုးစစ် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေ၏။ လီးကို စောက်ပတ်ထဲက ပြန်နုတ်ရမည်လားဟု တွေးလိုက်ပြန်သည်။ ထိုအချိန် နန်းမူမှာ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲမှ တစုံတခုသော ခံစားမှုကို ခံစားနေရသဖြင့် နိုးလာခဲ့ရသည်။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်၏။ ” ဟင်….ကိုမျိုး စစ်….ရှင်…ရှင်…” မျိုးစစ်တစ်ယောက် ” ပြွတ် ” ဟူ၍ စောက်ပတ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲချွတ်ကာ အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်။ နန်းမူ က အခြင်းအရာကို သဘောပေါက်လိုက်ကာ ပြုံးလိုက်ပြီး မျိုးစစ်၏ လက်ကို လှမ်းဆွဲထားလိုက်သည်။
လီးသည် စောက်ပတ်ထဲမှ ပြွတ်ကနဲ မြည်ကာ ကျွတ်ထွက်သွားသည်။ ” ဟို….ဟို….ကျုပ်ကို ခွင့်လွှတ်….” နန်းမူက ထပ်မံ၍ ပြုံးကာ မျိုးစစ်ကို သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ဆွဲယူကာ ဖက်ထားလိုက်သည်။ မျိုးစစ်၏ မျက်နှာက နန်းမူ၏ နို့နှစ်လုံးပေါ် အပ်ပြီးကျသွားသည်။ ” ကဲ…ပါ….ကိုမျိုး စစ်ရယ်….ကျွန်မ ခွင့်ပြုပါတယ်….ရှင် အလိုရှိသလို….” မျိုးစစ်တစ်ယောက် ဝမ်းသာလုံးဆို့သွားရသည်။ ” တကယ်…တကယ် လား နန်းမူ….ကျုပ်…ကျုပ်ကို စိတ်မဆိုးဘူးလား….” ” ဟင်….အင်း….ဆိုးပါဘူး….” နန်းမူသည် ပါးလေးဘေးသို့ မျက်နှာလွှဲကာ ချစ်စဖွယ်ပြန်ပြောလိုက်သည်။ မျိုးစစ်မှာ နန်းမူကို တင်းတင်းဖက်ထား ရင်း ” ဝမ်းသာလိုက်တာ….နန်းမူရယ်….ဒါဆို….ကိုယ်တို့ လုပ်ငန်းစမယ်နော်….” မျိုးစစ်သည် နန်းမူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ငန်းစပါလေတော့၏။ နန်းမူ၏ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲနှိုက် လိုက်သည်။ စောက်ရည်ကြည်လေးများမှာ စိမ့်ဆင်းကျလာသည်။ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုများမှာ ရာဂသွေး ပြည့်လျှမ်း လာမှုကြောင့် ဖောင်းကစ် နူးညံ့လာသည်။
လက်နှင့် မွှေတိုင်း မွှေတိုင်း စီးပိုင်ပူနွေးသော အတွေ့ကို ထိထိမိမိကြီး ခံစား နေရ သည်။ အပြင်သို့စွန်းထွက်နေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများပင် နူးညံ့ဖောင်းကြွလာသည်။ တင်းတင်း အိအိနွေးနွေးရှိန်း ရှိန်းရှိလှ၏။ လီးကို အလွန်အရသာထူးစေသော စောက်ခေါင်းပေါက်ကလေးများ ရှုံ့ချည်ပွချည် ပြဲချည်အာချည်ဖြစ်နေတော့ သည်။ မျိုးစစ်က ထထိုင်လိုက်ပြီး နန်းမူကို ဒူးနှစ်ချောင်းအကွာအဝေး ချဲစေလိုက်သည်။ ဝင်းဝါပြည့်တင်းသော နို့ကြီးနှစ်လုံး က ဖွေးဖွေး ထင်းထင်းကြီး ပေါ်ထွက်လာသည်။ နို့အုံတစ်ခုလုံးကို ယှက်သမ်းထားသော အကြောများ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေ သည်။ နို့သီးခေါင်း ဘေးရှိ အညိုရောင်သမ်းနေသော ကျပ်ပြားဝိုင်းခန့်ပတ်လည်တဝိုက်မှာ ဖောင်းစူနေပြီး ကြက်သီးဖုလေး တွေ ထနေ၏။ နို့သီးခေါင်း လေးက ခပ်တောင့်တောင့်လေးဖြစ်နေသည်။ မျိုးစစ်က နို့ကြီးနှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် အထက် သို့ပင့်ကာ ကုတ်နှိမ့်ဆုတ်ချေ ပေး၏။
နန်းမူ ဖင်ဆုံသားတွေ ဘယ်ညာလှုပ်ရမ်းသွားသည်။ ဒူးနှစ်ချောင်းက ဘေးသို့ကား၍ ကား၍ သွားတိုင်း စောက်မွှေးအုံမဲမဲ အုပ်အုပ်ကြီးနှင့် စောက်ဖုတ်ပြဲပြဲဟဟကြီးမှာ ထင်းကနဲ ထင်းကနဲ ပေါ်သွားသည်။ မျိုးစစ် က နို့အုံထွားထွားအိအိကြီးကို စုကပ် လိုက်ပြီး သူ့နှာခေါင်းကြီးဖြင့် ဘယ်ညာလူးကာ မွှေ၍ မွှေ၍ နမ်းလိုက်သည်။ နန်းမူ တစ် ကိုယ်လုံး ကာမအဆိပ်တွေ တရိပ်ရိပ်တက် ကာ တဟင်းဟင်း တဟတ်ဟတ် ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ဒီအချိန်ရောက်မှ မလိုးဘဲ ပစ်ထားလိုက်လျှင် သွေးပျက်၍ ရူးသွားနိုင်၏။ မျိုးစစ်က နို့နှစ်လုံးကို တစ်လှည့်စီ စို့ပေးလျက်ကပင် နန်းမူ၏ ပေါင်တံအောက် သို့ လက်လျှိုသွင်းကာ သူ၏ လက်ခလယ်ဖြင့် စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းကာ အသွင်းအထုတ်ခပ်သွက်သွက်ကလေး လုပ်ပေးပြန်သည်။
” ဗြစ်….ဗြစ်….ဗြစ်….ဗြစ်…..” ” ဖွတ်…ဖွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်….” ” အား….အီး….အင်း….အမ လေး….အင်း….ဟင်း….အီး…..ရှီး….ကျွတ်…..ရှီး…..” ” အမေ့….ဟင်း….ဟင်း…..အား…..” ကြာလျှင် နန်းမူတစ်ယောက် ကာမ သွေးဖောက်ပြန်၍ လီးတရူးမဖြစ်မည်စိုးသဖြင့် နှူးဆွကလိခြင်းကို ရပ်နားလိုက် သည်။ နန်းမူခမျာ ပါးစပ်ကြီးဟလျက် အသက်ရှူ သံတွေ မြန်ဆန်ပြင်းထန်ကာ မို့မောက်သော နို့အုံကြီးတွေက နိမ့်ချီ၊ မြင့်ချီ ဖြစ်နေပါတော့သည်။ မျိုးစစ်က မတ်တပ်ရပ်လျက် သူ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ပေါင်ကြားရှိ လီးကြီးမှာ အံ့မခန်းပင် ဒုံးကျည်ကြီးတစ်စင်းလို မတ်ထောင်နေသည်။ မျိုးစစ်က နန်းမူ၏ ခြေသလုံးကို ပခုံးပေါ်သို့ မတင်လိုက်ရာ နန်းမူခါးသည် အထက်သို့မြှောက်ကြွလာ၏။ ထိုမြှောက်ကြွလာသော ခါးတည့်တည့် အောက်တွင် ခေါင်းအုံးတစ်လုံးကို ခုပေးလိုက်သည်။ ပြီး မှ ခြေသလုံးကို ပြန်ချလိုက်ပြီး ပေါင်ရင်းဘက်ဆီသို့ ပို့ကပ်ထားလိုက် သည်။ ဒီတော့ နန်းမူပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ် ဖောင်း ဖောင်းကြီးမှာ မို့ပြူအာလာသည်။ ဖောင်းအစ်နီရဲနေသော စောက်ဖုတ် အတွင်းသားများသည်ပင် အားကြီးလာပြီဖြစ်သော ရာဂစိတ်ကြောင့် သိသာထင်ရှားစွာ အစ်ထွက်လာပါတော့သည်။
မျိုးစစ်က နန်း မူပေါင်နှစ်လုံးကြားကို ဒူးထောက်ထိုင်လိုက် သည်။ တစ်ထွာလောက် အကွာအဝေးနေတာတောင် သူ့လီးကြီးက နန်းမူ စောက်မွှေး အုံအထက်ရှိ ဆီးခုံမို့မို့အထက်သို့ မေး တင်နေပါသည်။ လီးထိပ်နှင့် အကြောစုံ အဖုတ်ကလေးနှင့် စောက်စိငုတ်ပြူးပြူးတို့ မကြာမ ကြာ ပွတ်ထိမိလေရာ နှစ်ဦးစလုံး မှာ ပူထူရှိန်းဖိန်း အီဆိမ့်သည်အထိ ကောင်းသွားကြသည်။ တသိမ့်သိမ့် တငြိမ့်ငြိမ့် ကောင်းလွန်း လှသော ကာမအရသာကို ယူတတ်မှရသည်။ မျိုးစစ်က ထိုကဲ့သို့ ပွတ်လျှောနည်းဖြင့် အားရကျေနပ်အောင် ဆော့ဆွပြီးနောက် သူ့ လီးကြီးကို လက်ဖြင့် အသာကိုင်ကာ နန်းမူ၏ ပွင့်အာပြဲဟနေသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲသို့ ဒစ်ထိပ်ဖျားမြုပ်ရုံ လက် တစ်ဆစ်ခန့် တေ့ မြုပ်လိုက်သည်။ လီးသည် တစ်ရစ်ချင်း ဝင်ရောက်သွားသည်။ ” အင်း….ဟင့်….အမေ့….အင့်….အင်း….အမေ့….ဟား….ဟင်း….အင်း….အင်း….” ” ဖွတ်…ဖွတ်….ပလွတ်….ပြွတ်….ဖွတ်….ပလွတ်…ဗြစ်….” မျိုးစစ်၏ ဆောင့်ချက်က နန်း မူအဖို့ ခြေဖျားမှ ဆံဖျားတိုင်အောင် ရှိရှိသမျှ ကာမအကြောတို့ကို ဖျင်းကနဲ ဖျင်းကနဲ မီး ပွင့်စေပါသည်။ နန်းမူ အသိစိတ်တွေ လွင့် ထွက်သွားပြီး ကာမရေယာဉ်ကျောသို့ မူးမေ့စွာ မျောပါနေပါတော့သည်။
စူချွန်မို့ တင်းနေသော နို့အုံ ရင်အစုံမှာ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် ဖြစ်နေတော့သည်။ ” အင်း….ဟင့်….ဟင်း…..” ” ပြွတ်….ဘွတ်….ဘွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်….” ” ဗြစ်….ဘွတ်…ပလွတ်… ပြွတ်….ဘတ်…..ပြွတ်…ဗြစ်…..” ” အား….ကြပ်ထုပ်နေတာပဲ နန်းမူရယ်….ကောင်းလိုက်တာ….အီး…အား….” နှစ်ယောက်စလုံး မှာ ပူထူရှိန်းဖိန်းပြီး ကျဉ်ထုံလာသည့်ဝေဒနာနှင့်အတူ အဆမတန်သော ကာမဆန္ဒအရသာထူးကို ခံစားလာရပြန်သည်။ ဒီတော့ ရှိ သမျှအင်အားကို ထုတ်ညှစ်၍ နန်းမူကလည်း အသည်းအသန်ကော့၍ ကော့၍ ခံလာသည်။ ” ဖွပ်….ပလွတ်…..ပြွတ်….ဗြစ်….ပ လွတ်…ဘွတ်….” ” ဖွပ်….ဖွပ်….ပလွတ်….ဖွပ်….ပလွတ်…ဘွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်….” ” အင့်….အား….အီး….အမေ့….ကောင်းလိုက် တာ….ကိုမျိုးစစ်ရယ်….ကျွန်မတော့ သေမလားမသိဘူး….ဟင်း….. အင်း….” စိတ်ထသလို အော်ဟစ်လှုပ်ရှားရင်း နန်းမူတစ် ယောက် မီးကုန်ယမ်းကုန် လှုပ်ရှားရင်း ကော့၍ ကော့၍ ပစ်ပစ်ခံပါ တော့သည်။
အချက်ပေါင်း (၃၀)ကျော်လောက် ဆောင့်အပြီး တွင် ” အီး….အ…အ….အဟင့်….ဟင့်….ရှီး….” ” ဗြစ်….ဗြစ်….အီး….အဟင့်….ဟင့်….အား….အ…..ရှီး….ကျွတ်….ကျွတ်…..” နန်းမူတစ်ကိုယ်လုံး ပြင်းထန်စွာ တုန်လှုပ်၍ စောက်ပတ်အတွင်းမှ လီးကို ပြတ်ထွက်မတတ် ဆုပ်ညှစ်ကာ စောက်ရည်များကို ပန်း လွှတ်လိုက်တော့သည်။ မျိုးစစ်သည်လည်း နန်းမူ ပြီးသွားပြီကို သိသဖြင့် ထိန်းထားသော သုတ်ကို နန်းမူ၏ စောက်ခေါင်းထဲရှိ သားအိမ်သို့တိုင်အောင် ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ သွေးသားအကြောမျိုးစုံတို့မှ ဖျစ်ညှစ်၍ ကာမသုတ် အားကို စွန့်ထုတ်လိုက်ရ သည့်အတွက် အလွန်ပင် နွမ်းဟိုက်ခွေသွားပါတော့သည်။ မျိုးစစ်တစ်ယောက် နန်းမူ၏ ရင်ဘတ်ပေါ် မှောက်ရက်ကျသွားကာ တ ရှူးရှူး အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေလေတော့သည်။ နန်းမူမှာလည်း မျက်လုံးအစုံကို မှေးစင်းကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ပစ်ချလိုက်ရ ပါတော့သည်။ ပြီးပါပြီ ။ ။ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်
Categorized as အငျးဆကျ Tagged တိုကျပှဲဝငျ အခဈြဇာတျလမျး